rightsforburma | Civil Rights Movement For Burma
by rightsforburma | Oct 21, 2019 | Uncategorized
by rightsforburma | Oct 17, 2019 | ARTICLES
ဒီနေ့ ကျနော်တို့ အားကိုးနေရတဲ့ ICC ခုံရုံးတွေ ; Ad hoc ခုံရုံးတွေ စွဲကိုင်နေတဲ့ နောက်ခံမူဝါဒကတော့ universal jurisdiction ပဲ ။
universal jurisdiction ကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရရင်တော့ လုံး၀ဥသုံချွင်းချက်မရှိသော တရားစီရင်ရေးအာဏာ ။ ဆိုလိုချင်တာက တိုင်းပြည်တခုရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကဖြစ်စေ ; နိုင်ငံရေးအပေးအယူကဖြစ်စေ ဒီတရားစီရင်ရေးအာဏာအပေါ် ချွင်းချက်နဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးလို့မရပါဘူး ။ ဒီတရားစီရင်ရေးအာဏာဟာ အချုပ်အခြာအာဏာရဲ့ အထက်မှာ ရှိပါတယ် ။
တိုင်းပြည်တခုရဲ့ အထွဠ်အခေါင် အချုပ်အခြာအာဏာထက်တောင် လေးနက်ပါတဲ့ လုံး၀ဥသုံချွင်းချက်မရှိတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း universal jurisdiction ရဲ့ မူလ အသုံးအနှုန်းကတော့ universal repression ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းပါ ။ universal repression ကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရရင်တော့ အလုံးစုံလွှမ်းမိုးသော ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းမှု ။
ဒီ universal repression ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို စတင်သုံးစွဲသူကတော့ Dr . Raphael Lemkin ပါပဲ ။
၁၉၃၃ မက်ဒရစ်မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ဥပဒေများဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်မှာ Dr . Lemkin က ဒီအသုံးအနှုန်းကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ ။
Dr . Lemkin က ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း အော်တိုမန်ပြည်ထဲရေးဌာနက အာမေးနီးယန်းတွေအပေါ်မှာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးစုအလိုက်ပစ်မှတ်ထားပီး ဇီ၀ရှင်သန်ရပ်တည်မှုကို ဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ လူ့အဖွဲ့ စည်းလိုက် ပစ်မှတ်ထားပီး ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဖျက်ဆီးမှုတွေကို တားဆီးဖို့အတွက် universal repression ဆိုတဲ့ အလုံးစုံလွှမ်းမိုးသော ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းမှု ဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူဝါဒတရပ်ဖြစ်သင့်တယ် ။ Dr . Lemkin ဆိုလိုချင်တာက နောက်ထပ်ကမ္ဘာပေါ်က လူသားမျိူးနွယ်တွေ ( အထူးသဖြင့်လူနည်းစုတွေ ) ဟာ အာမေးနီးယန်းတွေလိုတိုက်ခိုက်ခံရပီး ထိခိုက်ခံစားရမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရင် ဘယ်ဒေသ ဘယ်အချိန်မှာ ကျူးလွန်သူက ဘယ်လိုအဆင့်အတန်းပဲဖြစ်ပါစေ ကျန်တဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက အလုံးစုံလွှမ်းမိုးသော အင်အားနဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ နယ်နိမိတ်တွေကို ကျော်လွန်သက်ရောက်ပီး ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းဖို့ ( ရက်စက်မှုတွေ ဆက်မဖြစ်ဖို့ ) အားထုတ်ကြိုး‌ပမ်းရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ ။ [ အဲ့ဒီခေတ်အခါက Genocide ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မတီထွင်ရသေးလို့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှည်ရှည်လျားလျား ရေးပြရတာပါ ]
အလုံးစုံလွှမ်းမိုးသော ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းမှု အတွက် တရားစီရင်ရေးတင်မကပဲ သံခင်းတမန်ခင်းနည်းတွေကိုလည်း အသုံးပြုဖို့ Dr . Lemkin က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ တိုက်တွန်းခဲ့မှုတွေဟာ အရာမထင်ခဲ့ပါဘူး ။
” ခင်ဗျားပြောတာတွေက ဖြစ်ခေါင့်ဖြစ်ခဲကိစ္စတွေမို့ ဥပဒေပြဌာန်းစရာမလိုသလို မူဝါဒချမှတ်စရာလည်း မလိုဘူး ” လို့ အကြိမ်ကြိမ် တုန့်ပြန် ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ် ။
အသက် ၁၁ သန်းထပ်ရင်းရသောအသုံးအနှုန်း
Genocide ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို တီထွင်ခဲ့ပီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပီး Genocide convention ကို ပြဌာန်းနိုင်ပီးတဲ့ နောက်မှာတော့ နောက်ထပ်မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားလာခဲ့ရင်တော့ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာ ဘယ်သူဘယ်အဆင့်က ကျူးလွန်သည်ဖြစ်ပါ‌စေ လုံး၀ဥသုံချွင်းချက်မရှိသော တရားစီရင်ရေးအာဏာကို စွဲကိုင်ပီး အပြစ်ပေးအရေးယူရမယ် လို့ မူဝါဒချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအချိန်မှာတော့ ဘယ်သူကမှ ” ခင်ဗျားပြောတာတွေက ဖြစ်ခေါင့်ဖြစ်ခဲကိစ္စကြီးပါဗျာ ” လို့ မပြောရဲတော့ပါဘူး ။ သူတို့ရှေ့မှာတင် နာဇီတွေလက်ချက်နဲ့ လူ ၁၁ သန်း အသက်ပျောက်ခဲ့ရတာကိုး ။ အော့ခ်ျ၀ဇ်မှာတင် လူ ၁ သန်း ၁ သိန်း ‌အသတ်ခံခဲ့ရပီး ဒါဟာ ဥရောပစစ်မျက်နှာမှာ ဗြိတိန် + အမေရိကန်စစ်သား အကျအဆုံးထက် ပိုများနေတော့တာကိုး ။
universal jurisdiction ဆိုတဲ့ လုံး၀ဥသုံချွင်းချက်မရှိသော တရားစီရင်ရေးအာဏာဟာ စွဲကိုင်ကျင့်သုံးအပ်သော ကိရိယာပါလားဆိုတဲ့ အသိ ကမ္ဘာ့လူသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်မှာ လက်ခံလာဖို့ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုခန့်‌စောင့်စား ခဲ့ရပီး လူ့အသက် ၁၁ သန်း ရင်းခဲ့ရပါတယ် ။
ဒီအသုံးအနှုန်းဟာ အချုပ်အခြာအာဏာထက် ပိုမိုလေးနက် ပြင်းထန်သော သဘော ; သမိုင်း နဲ့ ပေးဆပ်မှုရှိနေပါတယ် ။ မြင်အောင်ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပီး မြန်မာတွေလက်ထဲ အချုပ်အခြာအာဏာရောက်လာဖို့ မြန်မာ ၁ သန်း သေမပေးခဲ့ရပါဘူး ။ universal jurisdiction ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်ရောက်လာဖို့ လူ ၁၁ သန်း မျိုးဖြုတ်အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ် ။
အခု ကျနော်တို့ ရန်သူတွေကို ထု‌နေတာ အဲ့ဒီ universal jurisdiction ဆိုတဲ့ လက်နက်ကိရိယာနဲ့ပါ ။ ရန်သူ‌တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့တောင် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကာလို့မရ‌တော့ ပါဘူး ။ ကာရင် အဲ့ဒီ အချုပ်အခြာအာဏာပါ ကွဲထွက်သွားအောင် အထုခံရမှာပါ ။
ကိုယ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်နက်ရဲ့ စွမ်းအားနဲ့ တန်ဖိုးကို သိထားကြပါ – ကိုယ့်လူတို့ ။
( ဗလီ ပြန်ဖွင့်ပေးတာလောက်နဲ့ ဖြီးပြမနေနဲ့ လို့ ပြောချင်တာဟေ့ ။ ပညာရှင် ဆန်ဆန် ပြောရတာ တအားလက်ညောင်းတယ် )
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၁
၁၉၈၈ သှဂုတလြ ၅ ရကြ စိနလြှငတြကလြာပီး မာရှယလြောကှငှောတယြ ။ ရနကြုနမြှာ လူ ၃၀၀၀ ထောငလြောကကြို ပဈသတပြီးတဲ့အခါမှာတော့ စိနလြှငဆြငြးသှားတယြ ။ သှဂုတြ ၁၁ US ဆီးနိတလြှှတတြောမြှာ မှနမြာစဈတပရြဲ့လုပရြပကြိုရှုံ့ခတွဲ့ resolution ဟာ ကနြ့ကှကသြူမရှိအတညဖြှဈတယြ ။ ဒီ resolution ကို ဆီနိတတြာ Moynihan က ဦးဆောငတြငသြှငြးတာ – ရဂငေအြစိုးရက သိပလြကမြခံခငွဘြူးရယြ ။
၁၉၈၈ စကတြငဘြာ ၇ ဆီးနိတမြှာတငသြှငြးခဲ့တဲ့ Resolution ကိုပဲ ဟောကဈြမှာ ထပမြံတငသြှငြးပီး ကနြ့ကှကသြူမရှိအတညပြှုလိုကတြယြ ။ ဒါဆို concurrent resolution ဖှဈသှားပီ ။ ရဂငေအြစိုးရဟာ ဟောကဈြတငသြှငြးတဲ့ Resolution ကိုတော့ လကခြံလိုကရြပီ ။
စကတြငဘြာ ၁၈ မှာ မှနမြာစဈတပကြ အာဏာသိမြးလိုကပြီး နဝတကို ဖှဲ့စညြးလိုကတြယြ ။
ဆီနိတတြာ Moynihan ကတော့ ” မှနမြာစဈတပဟြာ ထောငခြွီတဲ့ဆနျဒပှသူတှကေို ပဈခတသြတဖြှတပြီး ; ဘိနြးစဈဆငရြေးအတှကြ US က ပေးအပထြားတဲ့အဆိပရြညတြှကေို တောငတြနြးဒသကေ လူမွိုးစုရှာတှအပေေါကြှဲခနွတောမို့ မှနမြာစဈတပအြပေါအြမရေိကနကြ ထောကပြံ့ပေးနတောတှေ ခကွခြငွြးရပတြနြ့ပေးဖို့ ” တောငြးဆိုပါတယြ ။
ရဂငေအြစိုးရအနနေဲ့လညြး မှနမြာအပေါပြေးအပနြတေဲ့ စီးပှားရေးအကူအညီတှကေို ဖှတတြောကလြိုကပြီး လကနြကရြောငြးခမွှုကို ယာယီရပတြနြ့ထားလိုကပြါတယြ ။ နညြးပညာကဏျဍအတှကမြှနမြာဆီစလှေှတထြားတဲ့ အမရေိကနအြကှံပေးတှကေိုလညြး ပှနလြညခြေါယြူလိုကပြါတယြ ။ ထောကပြံ့ရေးပဈစညြးတှရပေဆြိုငြးရာမှာ မှနမြာပှညအြတှကပြေးဖို့ရညရြှယထြားတဲ့ သငြျဘောတစငြးစာဓါတမြှသှဇောတှကေို ဘငြျဂလားဒရြှေ့ဆီလှှဲပေးလိုကပြါသတဲ့ ။
၁၉၈၀ ကနေ အမရေိကနလြေ့ကငွြ့ပေးခဲ့တဲ့ မှနမြာ့တပမြတောအြရာရှိ ၂၅၅ ယောကရြှိခဲ့ပါတယြ – လတတြလောလေ့ကငွြ့နတေဲ့ မှနမြာစဈတပအြရာရှိတှကေို ပှညတြောပြှနခြိုငြးပီး လေ့ကငွြ့ရေးအစီအစဉတြှကေို ရပဆြိုငြးလိုကပြါတော့တယြ ။ ဒါတှဟော စကတြငဘြာ ၂၂ မှာ US ဘကကြ တုနြ့ပှနမြှုပါ ။
တခွိနတြညြးမှာပဲ နဝတကတော့ ဒီမိုကရစေီအရေးဆနျဒပှနတေဲ့သူတှကေို လမြးပေါမြှာ ပေါတြငပြဈသတပြီး သူ့အာဏာကို ခိုငကြညွအြောငတြညဆြောကပြါသတဲ့ ။ စုစုပေါငြး လူ ၁ သောငြးခှဲခနြ့ကို ပဈသတပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ နဝတဟာ အာဏာကို စုစညြးဆုပကြိုငလြိုကနြိုငပြီလို့ ပှောရမှာပါ ။
” မငြးတို့အမရေိကနတြှပေိတဆြို့တာလောကတြော့ ငါတို့က မှုကို မမှုတာ ” ဆိုတဲ့ တုနြ့ပှနသြံဟာ နဝတဗိုလခြွုပတြှရေဲ့ လကသြုံးစကားပေါ့ ။
နဝတဗိုလခြွုပတြှေ ဘာလို့ ဒီလောကလြသေံမာရဲသလဲ ?
ရဂငေအြစိုးရက ပိတဆြို့မှုတှေ ခမွှတလြိုကတြဲ့ ၁၉၈၈ စကတြငဘြာ ၂၂ မှာပဲ တိုကဆြိုငခြှငြးကှီးစှာ တရုတနြိုငငြံခှားရေးဝနကြှီးရဲ့ ပှောရေးဆိုခှငြ့ရပုဂျဂိုလြ Jin Guihua က ” တရုတဟြာ မှနမြာ့ပှညတြှငြးရေးကို ဝငရြောကစြှကဖြကမြှာ မဟုတဘြူး ” လို့ ခိုငခြိုငမြာမာ ကတိပေးလိုကပြါသတဲ့ ။
သှ ! အမိုကကြောငတြှမှော မိဈဆာမှောကတြဲ့ မိတဆြှအေားကိုးရှိသကိုးးး ။
တရုတြ = People ‘ s Republic of China – ကှနမြှူပကွတြရုတပြှညကြိုသာ ဆိုလိုခှငြးဖှဈပီး လူမွိုးရေးသဘောမဟုတပြါ
ဓါတပြုံ – ဆီနိတတြာ Moynihan
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၂
အကှောကအြကနြ နှငြ့ လကစြားခွမှေု
တကယတြော့ နဝတရော တရုတရြော အကှီးအကယွကြှောကနြတေဲ့ ဖှဈစဉတြရပရြှိခဲ့တယဗြွ ။ ၁၉၈၈ စကတြငဘြာ ၁၂ မှာ လယောဉတြငသြငြျဘောတစငြးဦးဆောငတြဲ့ အမရေိကနရြတပေအြုပစြုဟာ မှနမြာ့ရပေိုငနြကထြဲဝငလြာလိုကတြာ ရနကြုနတြောငဘြကြ မိုငြ ၁၉၀ အကှာအထိ ရောကလြာပါသတဲ့ ။ အမရေိကနအြစိုးရကတော့ လိုအပရြငသြံရုံးဝနထြမြးတှကေို ကယတြငဖြို့လို့အကှောငြးပှပမေဲ့ မှနမြာစဈတပဟြာ အကှောကအြကနဖြှဈသှားခဲ့ပါတယြ ။ အဲ့ဒီအခွိနကြစပီး ၈၈ မတိုငခြငတြုနြးကတရုတကြွောထောကနြောကခြံပေးထားတဲ့ ဗကပကို ရငဆြိုငခြဲ့ရတဲ့ မှနမြာစဈတပဟြာ ၈၈ အပီးမှာတော့ သူတို့ရဲ့ဦးတညရြနသြူဟာ အမရေိကနဖြှဈတယလြို့ ဆေးအထိုးခံလိုကရြသလိုပါပဲ ။
ဒါ့ကှောငြ့ ဗကပပှိုကှဲပီးခွိနမြှာ အနောကနြိုငငြံတှရေဲ့ အထောကအြပံ့ရထားတယလြို့ သူတို့ထငနြတေဲ့ ကရငတြှအပေေါြ မှနမြာစဈတပဟြာ လကစြားခွလေိုတဲ့မူဝါဒတှနေဲ့ ခညွြးကပဖြို့ ဗွူဟာဆှဲခဲ့ပီပေါ့ ။
လကတြှေ့မှာတော့ ကရငအြပါအဝငလြူနညြးစုလကနြကကြိုငအြဖှဲ့တှကေို အမရေိကနကြ ထောကပြံ့မှုပေးဖို့နနသေောသာ လူဆိုးစာရငြးသှငြးထားတာပါ ။ ၁၉၈၉ မတြ ၂ ကှနဂြရကကြှားနာပှဲမှာ US လကထြောကြ နိုငငြံခှားရေးဝနကြှီးက ” မှနမြာပှညကြ လူနညြးစုသူပုနတြှဆေိုတာ ခါးပိုကဆြောငလြကနြကကြိုငတြှဖှေဲ့ပီး ဘိနြးမှောငခြိုကူးနတေဲ့သူတှေ ” လို့ ထှကဆြိုခကွပြေးသှားပါသတဲ့ ။
အမှနတြော့ အဲ့ဒီအခွိနြ ရနကြုနမြှာ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညနြဲ့ အမရေိကနသြံအမတကြှီး Levin တို့ဟာ ဒူးခငွြးတိုကြ နေ့စဉတြှေ့ဆုံဆှေးနှေးဖှဈကှပီး ကှနဂြရကနြဲ့ အိမဖြှူတောဆြီ စာတှေ ဂဒီးဂဒီးပို့ခဲ့ကှပါတယြ ။ ဒါပမေဲ့ ပို့တဲ့စာတှဟော လူနညြးစုအခှငြ့အရေးထကြ ဒီမိုကရစေီအရေးကိုသာ ဦးတညခြဲ့ပီး ကရငအြပါအဝငလြူနညြးစုတှဟော ထိရောကတြဲ့နိုငငြံတကာအဆကအြသှယပြှတတြောကနြခေဲ့ကှပီး စဈအစိုးရဆီ ယဇအြပူဇောခြံရတော့မဲ့ သားကောငတြှသဖှေယြ ဖှဈလို့နပေါပီ ။
မှနမြာ့ဒီမိုကရစေီအရေးနဲ့ လူနညြးစုအခှငြ့အရေးပေါငြးစပရြုနြးကနနြိုငခြှငြး မရှိခဲ့တာဟာ စဈအစိုးရအတှကြ မဟာဗွူဟာ ထှကပြေါကဖြှဈသှားခဲ့ပါတယြ ။
မှနမြာနိုငငြံဆိုငရြာ အမရေိကနသြံအမတကြှီး Levin ဟာ ဒီမိုကရစေီအရေးအတှကတြော့ အတောတြကကြှှတဲ့သူပါ ။ ၁၉၈၉ ဇနနြဝါရီမှာ နဝတဖှဲ့ပေးထားတဲ့ ရှေးကောကပြှဲကောမြရှငကြို သံအမတကြှီးက သှားရောကတြှေ့ဆုံပါတယြ ။ အဲ့ဒီအခွိနမြှာ ရှေး / ကောဟြာ ရှေးကောကပြှဲလုပရြမဲ့ ရကကြိုတောငြ မသတမြှတရြသေးပါဘူး ။ သံအမတကြှီးကတော့ သူ့ရဲ့စိုးရိမပြူပနမြှုကို ဒဲ့ပဲထုတဖြောမြေးမှနြးပါတယြ – ” ရှေးကောကပြှဲမှာ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညဝြငပြှိုငခြှငြ့ရမလား ? ” ။ အဖှကေ မရရောလှပါဘူး ။
အမရေိကနမြှာတော့ ၁၉၈၉ ဇနနြဝါရီကစပီး စီနီယာဘုရြှအစိုးရသဈတကလြာပါတယြ ။ သမျမတဖှဈပီး ရကသြတျတပတအြနဲငယအြတှငြးမှာပဲ စီနီယာဘုရြှက မှနမြာကိုပေးအပထြားတဲ့ ကုနသြှယခြှငြ့ဆိုငရြာယဘေုယွ ( အခှနြ ) ကငြးလှတခြှငြ့ကို ရုပသြိမြးလိုကပြါတယြ ။ ဆိုလိုတာကတော့ မှနမြာကနေ အမရေိကနဆြီ ပို့တဲ့ သတမြှတကြုနပြဈစညြးတခွို့ကို အခှနပြှနကြောကတြာပါ ။ ကုနသြှယရြေးပိတဆြို့ဒဏခြတတြဲ့ ပုံစံတမွိုးပေါ့ ။ LDC နိုငငြံဖှဈနတေဲ့ မှနမြာက ပှငပြကမျဘာကို မယမြယရြရပို့ကုနဘြာမှ မရှိတဲ့အတှကြ ဒီပိတဆြို့မှုက ခကွခြငွြးထိခိုကမြှုမရှိဘူးလို့တော့ ပှောလို့ရပါတယြ ။ သို့သောလြညြး ဆိုရှယလြဈစီးပှားရေးကနေ စွေးကှကစြီးပှားရေးပှောငြးလဲပီး ပို့ကုနကြနေ ဝငငြှရဖေို့မွှောလြငြ့ထားတဲ့ နဝတအဖို့ ရရှညေရြပတြညရြေးကို ထိုးနှကရြာတော့ ရောကပြါတယြ ။
ဓါတပြုံ -မှနမြာနိုငငြံဆိုငရြာအမရေိကနသြံအမတကြှီး Levin
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၃
စာဆကဖြတလြို့ရလောကအြောငြ ဆနရြှငအြကှောငြးနဲနဲတော့ ပှောရမှာပါ ။ ဆနရြှငဆြိုတာကို ပိတဆြို့တယလြောကပြဲ ခပကြဉွြးကဉွြးနားလညလြို့မရပါဘူး ။
ဒီဘကခြတြမှော တနိုငငြံနဲ့ တနိုငငြံကှား စဈဖှဈတာမဟုတပြဲ ဒဏပြေးတဲ့ပုံစံအားလုံးကို ဆနရြှငလြို့ယူဆနိုငပြါတယြ ။ ရှေးခတြကေတော့ ဒသတှေငြး အိမနြီးခငွြးနိုငငြံတှကှေား ကုနပြဈစညြးရောငြးဝယခြှငြ့ပိတပြငတြာကနေ ဆနရြှငစြတယြ ။ အဲ့ဒီခတြတေုနြးက တနိုငငြံနဲ့တနိုငငြံကှား ကုနပြဈစညြးခငွြးဖလှယတြဲ့စနဈနဲ့ ရောငြးဝယတြာရှိသလို ; ငှသေားလကကြိုငနြဲ့ ရောငြးဝယကြှတာဆိုတော့ ပိတဆြို့ရတာက ရှငြးတယြ – ” အဲ့ဒီနိုငငြံက ကုနပြဈစညြးဆို မဝယနြဲ့ဟေ့ ; အဲ့ဒီနိုငငြံက ကုနသြညတြှနေဲ့ အရောငြးအဝယမြလုပနြဲ့ဟေ့ ; အဲ့ဒီနိုငငြံက ပဈစညြးဆို အခှနတြိုးကောကဟြေ့ ; အဲ့ဒီနိုငငြံကသငြေျဘာဆိုရငဆြိပကြမြးခှနတြိုးကောကဟြေ့ ” ဆိုတာမွိုးပေါ့ ။
ဒီခတြမှောတော့ ကုနသြှယမြှုက ကမျဘာလုံးဆိုငရြာ ခွိတဆြကယြှကဖြှာနတေော့ တနိုငငြံခငွြးကှား ပိတတြာတှကေ မထိရောကသြလိုဖှဈလာတယြ – ပိတထြားတဲ့နိုငငြံဆီက ကုနပြဈစညြး ဝယမြရလညြး ကနွတြဲ့ နိုငငြံတှဆေီက လှညြ့ပတဝြယလြို့ရနတောကိုး ; အလားတူ ပိတထြားတဲ့နိုငငြံဆီတငပြို့လို့မရလညြး ကှားနိုငငြံကတဆငြ့ တငပြို့လို့ရနပှနေရြော ။
ရှေ့မှာရေးခဲ့သလို အမရေိကနကြ နဝတပို့ကုနတြခွို့ကို အခှနတြိုးကောကပြီး ကုနသြှယရြေးပိတဆြို့ဒဏခြတတြာလုပလြညြး မှနမြာက အိမနြီးခငွြးနိုငငြံတှနေဲ့ ကုနသြှယရြေးတိုးမှှငြ့ပီး တောငြ့ခံလို့ရတယြ ။ ဒါဟာ unilateral trade sanction ကို တောငြ့ခံတဲ့ပုံစံ ။
အဲ့ဒီမှာမှ အမရေိကနကြ အငအြားကှီးတော့ သူ့ရဲ့မိတဆြှနေိုငငြံတှနေဲ့ ပေါငြးပီး အခွိနကြိုကအြခါကိုကြ တပှိုငနြကြ ပိတဆြို့တာမွိုးလုပရြငတြော့ အပိတခြံရတဲ့နိုငငြံဟာ တောငြ့ခံဖို့ ပိုခကသြှားတယြ ။ ဒါမွိုးက ကုလသမဂျဂလုံခှုံရေးကောငစြီကတဆငြ့မှောကကြိုရီးယားကို လုပတြဲ့ပုံစံပဲ – multilateral trade sanction ။ မှနမြာကို ပိတဆြို့ခဲ့ရာမှာ ကုလသမဂျဂလုံခှုံရေးကောငစြီတငပြီး တပှိုငနြကပြိတဆြို့ဖို့နနသေောသာ ဥရောပသမဂျဂနဲ့ အမရေိကနြ စညြးဝါးကိုကပြီးပိတဆြို့တာတောငြ ၂၀၀၄ ခုနှဈကွောမြှ ဖှဈလာခဲ့တာ ။
ဒါဆို နိုငငြံတကာကုနသြှယရြေးကှနယြကကြယွပြှနြ့တဲ့ ဒီခတြမှော ပိတဆြို့မှုကို ထိရောကအြောငြ ဘယလြို လုပမြလဲ ?
တိုကရြိုကြ ကုနသြှယရြေးကို ပိတဆြို့တာထကြ ဘဏျဍာရေးဆိုငရြာ ပိတဆြို့တာက ပိုထိရောကတြဲ့ ခတြဖှေဈလာတယြ ။ ဘယသြူမှ လကငြငြးငှသေားနဲ့ အရောငြးအဝယမြလုပတြော့တဲ့ ဒဈဂစွတြယခြတြကေိုးဗွ ။ ကိနြးဂဏနြးအပှောငြးအလဲတှကေို အခှခေံပီး ကုနသြှယရြေးလုပနြတေဲ့ခတြမေို့ အဲ့ဒီဒဈဂစွတြယဘြဏစြနဈတှကေို ခွုပကြိုငထြားနိုငတြဲ့ နိုငငြံက ကိနြးဂဏနြးတှကေို လှှဲမပေးရငြ ဘာအရောငြးအဝယမြှ ဆကလြုပလြို့မရတော့ဘူး ။
နိုငငြံအသီးသီးဟာ အပှညပြှညဆြိုငရြာကုနသြှယရြေးအတှကြ နိုငငြံခှားအရနငြှဆေောငထြားရတယြ – အဲ့လိုဆောငထြားရာမှာ ကမျဘာ့နိုငငြံအားလုံးဆောငထြားတဲ့ အရနငြှရေဲ့ ၆၂ % ဟာ အမရေိကနဒြေါလြာပဲ ( ယူရိုငှကေ ၂၁ % ရှိတယြ ) ။ သူ့ငှလညြေးကိုယမြယုံ ; ကိုယြ့ငှလညြေးသူမယုံပဲ ဒေါလြာကိုသာ ယုံကှသကိုး ။ ( ၈၀ % သော ကမျဘာ့ငှကှေေးလညပြတမြှုဟာ အနောကနြိုငငြံတှလကေထြဲမှာဆိုတာကို မှငရြငရြပီ ။ )
အဲ့ဒီ ၆၂ % သောဒေါလြာတှကေို လှှဲပှောငြးပေးရာမှာ ကမျဘာပေါမြှာ ဘယနြရောကနေ ဘယနြရောကိုပဲ လှှဲလှှဲ အမရေိကနဘြဏျဍာရေးဌာနက ဖှဲ့ထားတဲ့ CHIPS နဲ့ SWIFT လို ဒဈဂစွတြယဘြဏျဍာရေးစီစဈမှုတှကေို ဖှတကြိုဖှတသြနြးရတယြ ။ အဲ့လို ဖှတသြနြးခွိနမြှာ ငှလှေှဲသူတှထေဲမှာ အမရေိကနအြစိုးရက ပဈမှတထြားတဲ့ အဖှဲ့အစညြး လူပုဂျဂိုလြ နိုငငြံ ပါလာရငြ ပိတထြားလိုကတြာပဲ ။ ကုနသြှယမြှုဟာ ရပတြနြ့သှားပီ – တဖကနြဲ့ တဖကြ ကုနထြုပကြှီးတှပေိုကပြီး ဘာတာစနဈနဲ့ ရောငြးဝယရြတဲ့ အခှစေိုကသြှားရော ။
[ CHIPS = Clearing House Interbank Payment System ;
SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications ]
တကယလြို့ အမရေိကနဒြေါလြာအစား တရုတငြှသေုံးပီး ကုနသြှယမြယဆြိုရငကြော – တရုတကြ သူ့ငှတနေဖြိုးကို ကစားပီး ကုနသြှယရြေးမှာ တဖကစြောငြးနငြး အသာစီးရယူတဲ့ဒဏကြို ခံဖို့သာပှငထြား ။ တရုတဟြာ အမရေိကနဒြေါလြာနဲ့ အရောငြးအဝယလြုပခြှငြ့အပိတခြံထားရတဲ့ နိုငငြံငယလြေးတှကေို အဲ့လို အခဉွဖြမြးဖို့စောငြ့နတော ။
အဲ့လို ဘဏျဍာရေးပိတဆြို့ရာမှာ ကုနသြှယရြေးမှာသာမကပဲ ဖှံ့ဖှိုးရေးအကူအညီတှေ ; ခွေးငှကဏျေဍတှမှောပါ ထပပြိတလြို့ရတယြ ။ ဥပမာ – ကမျဘာဘဏရြဲ့ဗီတိုဟာ အမရေိကနတြနိုငငြံတညြးပဲ ကိုငထြားနိုငတြဲ့ပုံစံမို့ ” အမရေိကနဘြဏျဍာရေးနှငြ့ပတသြတသြောအကူအညီမွား ဆိုငရြာနိုငငြံမရရှိစရေ ” လို့ ကှနဂြရကကြ ပှဌာနြးလိုကရြငြ ဆိုငရြာနိုငငြံဟာ အတိုးနှုနြးသကသြကသြာသာနဲ့ ခွေးငှမရေရှိတော့လောကအြောငြ ဖှဈသှားရတယြ ။ အဲ့သလို မိတဆြှမေဲ့တဲ့ နိုငငြံငယလြေးတှကေို အတိုးနှုနြးကှီးကှီးနဲ့ ငှခွေေးပီး အမှတထြုတတြတတြဲ့ နိုငငြံငံကတော့ တရုတပြဲ ။
ဓါတပြုံ – Federal Reserve Bank of New York
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၄
နဝတအစိုးရအနနေဲ့လညြး ၁၉၈၈ – ၈၉ မှာ ရပတြညရြေးအတှကြ ရုနြးကနနြရတေဲ့ အနအထေားပါ ။ လကထြဲမှာ နိုငငြံခှားအရနငြှေ ဒေါလြာသနြး ၃၀ ခနြ့ပဲရှိပီးတော့ အငအြား ၁ သိနြး ၉ သောငြးခနြ့ရှိတဲ့ စဈတပကြိုတောငြ လခပေးဖို့ မလှယတြဲ့အခှအနေပေါ ။ နဝတ ရှေ့ဆကရြရှညေရြပတြညဖြို့ တခှားကုနသြှယရြေးအငအြားကှီး နိုငငြံတရပရြဲ့ အကူအညီလိုခွပေီ ။
၁၉၈၉ မလေ – တရုတဝြနကြှီးခွုပနြဲ့ မှနမြာသံအမတကြှီးတှေ့ဆုံရာမှာ ဝနကြှီးခွုပကြ မှနမြာသံအမတကြှီးကို သခွောအာမခံလိုကပြါသတဲ့ __ ” မှနမြာ့ပှညတြှငြးရေးကို တရုတကြလုံးဝမစှကဖြကပြါဘူး ” ။
၁၉၈၉ ဇှနလြ – နဝတအတှငြးရေးမှူးဗိုလခြွုပခြငညြှနြ့က မှနမြာနိုငငြံဆိုငရြာ တရုတသြံအမတကြှီးကို တှေ့ဆုံပီး ” တိနအြငမြနရြငပြှငမြှာ ဖှဈခဲ့တာတှအတှေကြ စာနာနားလညပြါကှောငြး ” ထုတဖြောပြှောဆိုပါသတဲ့ ။
တိနအြငမြနရြငပြှငမြှာ လယောဉပြဈစကအြမှောကနြဲ့ ပဈသတခြံရတဲ့ ကွောငြးသားတှကေို စာနာတာမဟုတပြါဘူး – တရုတကြှနမြှူနဈအစိုးရအပေါြ စာနာတာပါတဲ့ ။
ဗိုလခြွုပခြငညြှနြ့ရဲ့ စာနာခှငြးတရားနဲ့အတူ တရုတြ – မှနမြာကုနသြှယရြေးဟာ ပှငြ့လနြးလို့လာခဲ့ပါပီ ။
နဝတအဖို့ အသကရြှူပေါကရြရှိစမေဲ့ တရုတြ – မှနမြာကုနသြှယရြေးဟာ တနှဈကို ၂၅ % နဲ့တိုးတကလြာခဲ့ပါတယြ ။ အဆိပပြနြးတှကေို မွိုခရွငြး မှနမြာ့စီးပှားရေးဟာ အသကဆြကလြပေီ ။
တရုတပြှညနြဲ့ နဝတကှား ရှှလမြေးငှလမြေးဖောကရြာမှာ အဓိကဗိသုကာကတော့ ဗိုလခြွုပခြငညြှနြ့ပါ ။ ခငညြှနြ့ဟာ တရုတနြဲ့ခစွကြှညရြေးတောကြီတှေ ကှှယနြသလေောကြ အမရေိကနကြိုတော့ ကတကြတလြနအြောငြ ရနတြှေ့ပါသတဲ့ ။
၁၉၈၉ သှဂုတလြ – ၈၈ အရေးအခငြးတနှဈပှညြ့ခွိနမြှာ အမရေိကနသြံအမတကြှီး Levin က ” စဈအစိုးရဟာ ဖမြးဆီးထိနြးသိမြးထားသူတှအပေေါြ ညှဉြးပမြးနှိပစြကတြာတှေ လုပနြကှေောငြး ” ထုတဖြောပြှောကှားလိုကပြါတယြ ။ ဗိုလခြွုပခြငညြှနြ့ကတော့ ခကွခြငွြးပဲ ” အဲ့ဒီ Levin ဟာ လကြွာအစှနြးရောကြ ဖကွဆြီးရေးသမား ” လို့ ကှကခြေါငြးဆိတမြခံတုနြ့ပှနပြါတယြ ။
Levin ဟာ ၈၈ အရေးအခငြးအတှငြး အမရေိကနသြံရုံးအနီး ဆနျဒပှသူတှကေို ရပေေးတာကနေ ; သနတေမြှနသြူတှကေို ဆေးကုပေးတာအပါအဝငြ ; ပဈခတနြတောတှကေို ဗီဒီယိုရိုကြ မှတတြမြးတငခြဲ့သူမို့ ခငညြှနြ့တို့အတှကတြော့ အဖကွသြမားကှီးပေါ့ဗွာ ။
အမှနတြော့ ၁၉၈၉ နိုဝငဘြာမှာ သံအမတကြှီး Levin ဟာ သူ့ရဲ့ ၃ နှဈသကတြမြးကုနခြါနီးနပေါပီ ။ မှနမြာထောကလြှမြးရေးကတော့ သူတို့ထုတတြဲ့ ” စီအိုငအြခှရှေေုပသြမွှ ” ဆိုတဲ့စာအုပမြှာ Levin ကို ရစရာမရှိအောငြ ရေးသားအပုပခြဝွါဒဖှနြ့ထားလိုကပြါတယြ ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ အမရေိကနြ – မှနမြာ သံတမနဆြကဆြံရေးဟာ နညေိုခွိနရြောကခြဲ့ရပီပေါ့ ။
တရုတြ = People ‘ s Republic of China – ကှနမြှူနဈတရုတပြှညကြိုသာ ဆိုလိုခှငြးဖှဈပီး လူမွိုးရေးသဘောမဟုတပြါ
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၅
၁၉၈၉ မတြ မှာ နဝတက ရှေးကောကပြှဲဥပဒကှမြေးကို ထုတပြှနခြဲ့ပီး လာမဲ့ ၁၉၉၀ မေ ၂၇ ကို ရှေးကောကပြှဲကငွြးပမဲ့ရကအြဖှဈကှငှောလိုကပြါတယြ ။ အမရေိကနအြစိုးရကတော့ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညရြှေးကောကပြှဲဝငခြှငြ့ရရေး တောငြးဆိုပါတယြ ။ နဝတက ခေါငြးမာမာနဲ့တုနြ့ပှနတြဲ့အပှငြ အမရေိကနရြှေးကောကပြှဲစောငြ့ကှညြ့ရေးအဖှဲ့တှကေိုပါ ခှငြ့ပှုမှာမဟုတကြှောငြး ပှောလှှတပြါတယြ ။
မှနမြာ့နိုငငြံရေးမှာ အားလုံးကရှေးကောကပြှဲကိုပဲ မွှောကြှညြ့နခွေိနမြှာ နဝတက သူဘာလုပလြို့ရလဲ ထောငြ့စုံကနေ တှကခြကွပြီးသားပါ ။
နဝတအနနေဲ့ အိမဖြှူတောကြို ပွော့ကှကနြှိုကရြနတေဲ့ အကှကတြခုရှိပါတယြ __ အဲ့ဒါက မူးယဈဆေးဝါးနှိမနြငြးရေးပါ ။ မှနမြာ့တောငတြနြးဒသကေ မူးယဈဆေးဝါးနဲ့ လကနြကကြိုငအြဖှဲ့တှကေို နှိမနြငြးရာမှာ မှနမြာစဈတပရြဲ့ အကူအညီမရှိမဖှဈလိုအပတြယလြို့ အမရေိကနအြစိုးရအဆကဆြကကြ တစိုကမြှတမြှတြ ယူဆထားကှောငြး နဝတ က သခွောသိနပေါတယြ ။ ၁၉၈၉ မတလြ ၂ ရကနြေ့ ကှနဂြရကကြှားနာပှဲမှာ အမရေိကနြ လကထြောကနြိုငြ / ဝနရြဲ့ သူပုနနြဲ့ မူးယဈကိဈစ ခွိတဆြကဖြှကှေားမှုကို ကှညြ့ရငြ အိမဖြှူတောအြနနေဲ့ မှနမြာစဈတပအြပေါြ အားကိုးနဆေဲလို့ နဝတ က တှကမြိနတောပေါ့ ။ အဲ့ဒါကှောငြ့လဲ ရှေးကောကပြှဲနဲ့ ပတသြတရြငြ နဝတက ပှငြးပှငြးထနထြနြ တုနြ့ပှနရြဲတာပေါ့ဗွာ ။
၁၉၉၀ ဖဖေောဝြါရီမှာ အမရေိကနအြစိုးရက မူးယဈဆေးဝါးနှိမနြငြးရေးမှာ မှနမြာကို အဆငြ့လွှော့ခသွတမြှတလြိုကပြါတယြ ။ ဒါပမေဲ့ အမရေိကနမြူးယဈဆေးဝါးတိုကဖြကွရြေးဌာနအကှီးအကဲကတော့ ဒီလိုအဆငြ့လွှော့ခတွာကို လကမြခံခငွပြါဘူး – မှနမြာစဈတပနြဲ့ပူးပေါငြးဆောငရြှကဖြို့ အားသနနြဆေဲပါ ။ စဈအစိုးကို ကှိတခြငွတြဲ့ဆီနိတတြာ Moynihan ကတော့ မူးယဈဆေးဝါးတိုကဖြကွရြေးဌာနဟာ ကိုယပြိုငနြိုငငြံခှားရေးမူဝါဒရှိနတောလားလို့ ခနဲ့ပါသတဲ့ ။
၁၉၉၀ မေ ၂၇ ရှေးကောကပြှဲမှာ NLD ပါတီက ၈၀ % ကွောနြဲ့အနိုငရြလိုကတြော့ အမရေိကနအြစိုးရက အာဏာမှနမြှနလြှှဲပေးဖို့ တောငြးဆိုပါတယြ ။ ၁၉၉၀ သှဂုတလြမှာ အမရေိကနနြိုငငြံခှားရေးဝနကြှီးက ဗိုလခြွုပမြှူးကှီးစောမောငဆြီစာရေးပီး ” အာဏာလှှဲပေးဖို့ ” တောငြးဆိုပါတယြ ။
တကယတြော့ အမရေိကနနြိုငငြံခှားရေးဝနကြှီးရဲ့ ဒီသံခငြးတမနခြငြးလှုပရြှားမှုက နဝတတုနြ့ပှနမြှုဘယလြိုရှိမလဲ တို့ကှညြ့တဲ့သဘောပါ ။ နဝတဘကကြ ခကွခြငွြးအာဏာလှှဲပေးဖို့ ဆနျဒမရှိတာကိုတှေ့တဲ့အခါမှာတော့ စီနီယာဘုရြှအစိုးရဟာ နဝတနဲ့ပဲ လကတြှဲပီး မူးယဈနှိမနြငြးရေးဆောငရြှကဖြို့ ခှလှမြေးပှငလြာပါတယြ ။ လကတြှေ့ကကွ အလုပဖြှဈတဲ့လမြးကိုလွှောကတြဲ့သဘောပေါ့ ။ ကှနဂြရကထြဲက မူးယဈဆေးဝါးကိဈစတာဝနယြူထားရတဲ့ အမတတြခွို့ကလညြး အမရေိကနအြစိုးရရဲ့ဒီခှလှမြေးကို ကှိုဆိုလိုကပြါတယြ ။
ဒီမှာတငြ အဲ့ဒီခှလှမြေးကို ကနြ့လနြ့ခံဖို့ဆီနိတတြာ Moynihan + အောကလြှှတတြောအြမတြ Stephen Solarz + နိုငငြံခှားရေးဌာနတှငြးက လူ့အခှငြ့အရေးသမားတခွို့က အားထုတလြာရပါတယြ ။
ဒီနရောမှာ ကနွောမြှငစြခငွေတြဲ့ ပထမအခကွကြ လူ့အမွားကှားမှာဟော့နတေဲ့ ရှေးကောကပြှဲကိဈစထကြ လူမသိသူမသိ မူးယဈဆေးဝါးကိဈစကို အမရေိကနအြစိုးရက ဦးစားပေးရှေးခယွသြှားတယဆြိုတာပါ ။ နောကပြီး အမရေိကနအြစိုးရဟာ သူတို့ရဲ့ လကတြှေ့အကွိုးစီးပှားကိုပဲ ဦးထိပထြားလေ့ရှိတာကိုပါ ။ ဒါဟာ ပုံမှနဖြှဈရိုးဖှဈစဉကြိဈစဖှဈပီး လူ့အခှငြ့အရေးဆိုတာ သပသြပဖြောကထြှကပြီးတှနြးရတယဆြိုတာကိုပါ မှငစြခငွေပြါတယြ ။
နရငြေးထိုငရြငြး အမရေိကနအြစိုးရက အကုနလြုပပြေးသှားမယထြငနြသေူတှရှေိရငြ အတှေးပှောငြးထားပါ – သူ့ဘကကြိုယြ့ဘကြ အပှိုငတြှနြးရတဲ့ ပှဲတှဆေိုတာကို အမှဲတမြးသတိကပထြားပါ ။ အရေးကှီးတာက အမရေိကနမြှာ အခှစေိုကပြီး ကိုယြ့အတှကြ တှနြးပေးတဲ့ယနျတယားရှိနဖေို့ပါ – မရှိဘူးဆိုရငတြော့ ရာစုနှဈတဝကလြောကအြကှိတခြံရတတတြယဆြိုတာ ကနွောတြို့မှနမြာပှညကြမှဈဆလငမြတြှကေိုယတြိုငကြ သကသြပေါပဲ ။
ဓါတပြုံ – ၁၉၉၀ ရှေးကောကပြှဲ
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၆
အမရေိကနအြစိုးရပိုငြးက လကတြှေ့အကွိုးစီးပှားအပေါအြခှခေံပမေဲ့လညြး ကှနဂြရကထြဲမှာတော့ မှနမြာ့ဒီမိုကရစေီအတှကြ တှနြးတှနြးတိုကတြိုကြ လုပပြေးသူတှရှေိပါတယြ ။
ထိုငြးနယစြပဆြီထှကပြှေးလာတဲ့ မှနမြာကွောငြးသားတှကေို ကူညီထောကပြံ့ဖို့ ကှနဂြရကကြ ၁၉၈၉ နှဈဦးပိုငြးကတညြးက ဒေါလြာ ၂ သနြး ခပွေးလိုကပြါတယြ ။ နှဈစဉလြညြး ဒီထောကပြံ့ငှကေို တိုးမှှငြ့ပေးသှားခဲ့ပါတယြ ။
၁၉၉၀ ဧပှီ ၂၇ ဆီးနိတမြှာ Moynihan က ” မှနမြာ့ပို့ကုနမြွားပိတဆြို့မှုဥပဒေ ” ကို စတငသြှငြးခဲ့ပီး ကနြ့ကှကသြူမရှိခဲ့ပါဘူး ။ ဒါပမေဲ့ စီနီယာဘုရြှအစိုးရက ဒီဥပဒကေို ဆနြ့ကငွခြဲ့ပါတယြ ။
သကတြမြးကုနသြှားတဲ့ သံအမတကြှီး Levin အစား Vreeland ကို ခနြ့အပဖြို့ ဆီးနိတမြှာ စဈမေးပှဲတှလေုပပြါတယြ ။ အဲ့ဒီစဈမေးပှဲတှဟော ဆီနိတတြာတှအတှေကြ မှနမြာနဲ့ပတသြတပြီး ဖေါကခြှဲရာနရောတှဖှဈေလာပါတယြ ။ ဆီနိတတြာ Cranston က ” နဝတဟာ လူသတအြစိုးရ ; မူးယဈရာဇာတှနေဲ့ ပလူးနတေဲ့အစိုးရ ” လို့ကှိတရြငြး စီနီယာဘုရြှအစိုးရရဲ့ ရပတြညခြကွကြို နှဲ့ပါတယြ ။ Vreeland ဆိုတာ စီနီယာဘုရြှရဲ့ ရောငြးရငြးဘောဒြါကှီးကိုးဗွ ။ ဒါနဲ့ Vreeland ကို ခနြ့အပဖြို့ ပကွပြှားသှားပီး နောကထြပသြံအမတကြှီးလွာထားသူကို စဈမေးရတဲ့ ဆီနိတတြာကတော့ Moynihan ကိုယတြိုငပြဲလေ ။ Moynihan ကတော့ မှနမြာနဲ့သံတမနအြဆကအြသှယလြွှော့ခခွငွသြူဆိုတော့ သံအမတကြှီး မခနြ့အပဖြှဈအောငြ အခွိနဆြှဲထားလိုကပြါတယြ ။ အဲ့ဒီမှာတငပြဲ အမရေိကနသြံအမတလြောငြးကှီးခမွာ မှနမြာပှညကြို ခှခခွှေငြ့တောငြ မရတော့ပါဘူးတဲ့ ။ မူဝါဒအရဗှောငကြှငှောပီး သံတမနအြဆငြ့လွှော့ခတွာတော့ မဟုတသြေးပါဘူး – လုပထြုံးလုပနြညြးအရ ဂွောငကြပပြဈလိုကတြာပါ ။
၁၉၉၀ အောကတြိုဘာမှာ ထငရြှားတဲ့ ဆီနိတတြာ ၁၁ ယောကကြ စီနီယာဘုရြှဆီစာရေးပီး ” Custom & Trade Act of 1990 ” အတိုငြး မှနမြာကို ပိတဆြို့ဒဏခြတဖြို့ တောငြးဆိုလိုကပြါတယြ ။ ပိတဆြို့ဒဏခြတမြှုတှဟော အနှေးနဲ့ အမှနရြောကလြာတော့မယဆြိုတာ သခွောသှားပါပီ ။ ၉၀ ရှေးကောကပြှဲရလဒအြတိုငြး အာဏာလှှဲမပေးခငွပြဲ ရရှညေအြစိုးရလုပဖြို့ပှငထြားတဲ့ နဝတအနနေဲ့ ရရှညေစြီးပှားရေးအကူအညီတခွို့လိုအပတြော့မှာသခွောပီလေ ။
၁၉၉၀ ဒီဇငဘြာ ၂၇ မှာ တရုတနြဲ့ မှနမြာကှား စီးပှားရေးဆိုငရြာပူးပေါငြးဆောငရြှကရြေးသဘောတူစာခွုပြ ခွုပဆြိုလိုကပြါတယြ ။ ဒီစာခွုပအြရ တရုတကြ မှနမြာကို အတိုးမဲ့ခွေးငှေ ၅ နှဈပေးဖို့လညြး ပါလာလရေဲ့ ။
တရုတရြဲ့အတိုးမဲ့ခွေးငှနေဲ့ပတသြတလြို့အကောငြးမှငသြူတှရှေိနိုငပြါတယြ ။ မှနမြာလူမွိုးအမွားစုစိတထြဲမှာ ခွေးငှဆေိုတာ ယူပီးကှိုကသြလိုသုံးခှငြ့ရှိတယလြို့ထငကြှတာကိုး – ခစွတြီးဆီတောငြ လယပြေါငငြှခွေေးပီးသုံးခငွသြလိုသုံးရတယထြငတြတတြာမွိုး ။ အမှနတြကယတြော့ နဝတ နဲ့ တရုတနြဲ့ စီးပှားစတငလြညပြတဖြို့ နဝတလကထြဲ ငှတခွေို့ထညြ့ပေးမှ ဖှဈမယလြို့ တှကပြီးမှ ခွေးတာပါ ။ ဥပမာ __ တရုတြ – ဗမာကုနသြှယရြေးဖှငြ့ဖို့ ဗမာက လမြးတောငြ ကောငြးကောငြးမရှိရငြ ကုနသြှယပြီးအကွိုးအမှတရြှာခငွတြဲ့ တရုတကြ မှနမြာလမြးခငြးဖို့ငှခွေေးမှာပါပဲ ။ ရလာမဲ့ အတိုးထကြ ကုနသြှယရြေးငှကေ ပိုပီး စို့စို့ပို့ပို့ဖှဈမှာသခွောရငြ ( သခွောအောငလြညြး ခွေးငှအကှေောငြးပှပီး စာခွုပစြာတနြးနဲ့ အသာစီးယူထားပီးသားပါ ) အတိုးမဲ့ခွေးပေးလိုကမြှာပါ ။ ခွေးငှကေို ပိုကဆြံလို့မှငတြာထကြ အလုပတြခုစဖို့ ခလုတဖြှငြ့လိုကတြယဆြိုတာ မှငတြတဖြို့ လိုပါတယြ ။ နောကပြိုငြးမှာ ပေါလြှငလြာပါလိမြ့မယြ ။ ]
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၇
နဝတဟာ ၁၉၉၀ ရှေးကောကပြှဲရလဒကြို ပယွောလကနပြှုထားလိုကတြာ ၁၉၉၁ မလေ ရောကလြို့ တနှဈပှည့သြညအြထိ အာဏာလှှဲဖို့အရိပအြယောငမြပှပါဘူး ။ အဲ့ဒါကှောင့ြ ၁၉၉၁ မေ ၂၁ မှာ US ကှနဂြရကလြှှတတြောအြမတတြှကေ ” အမရေိကနအြစိုးရအနနေဲ့ မှနမြာ့ဒီမိုကရစေီအရေးနှင့လြူ့အခှင့အြရေးအတှကြ လူသိရှငကြှားဖိအားပေးကှငှောခကွထြုတပြှနဖြို့ ” စီနီယာဘုရြှဆီ တောငြးဆိုကှပါတယြ ။
၁၉၉၁ ဇူလိုငမြှာ စီနီယာဘုရြှက မှနမြာနဲ့အမရေိကနကြှား အထညအြလိပပြို့ကုနသြဘောတူစာခွုပကြို သကတြမြးမတိုးတော့ဖို့ဆုံးဖှတလြိုကပြါတယြ ။ စီနိတတြာ Moynihan ကတော့ ” မှနမြာပှညကြ အထညတြစတောငမြှ ရောကမြလာတော့ဖို့မွှောလြင့တြယြ ” လို့ အားပေးပါသတဲ့ ။
အမရေိကနဘြကကြ မှနမြာနဲ့ကုနသြှယရြေးကို အဲ့သလိုတရဈကှပအြပီး ၂ လအကှာ ၁၉၉၁ သှဂုတလြမှာတော့ တရုတကြ မှနမြာကို သူ့ရငခြှငထြဲဆှဲသှငြးဖို့ပှငလြာပါတယြ – ကခငွပြှညကြနပြိုကတြီးကနေ ရှမြးပှညမြုနြးလားအထိ မှနမြာနယစြပတြလွှောကနြဲ့ မဉွြးပှိုငြ တရုတဘြကမြှာ နယစြပကြုနသြှယရြေးစခနြး ၉ ခု ဖှင့လြှဈလိုကပြါတယြ ။ ၁၉၇၈ ကနေ ၁၉၉၁ အထိ တရုတြ – မှနမြာကုနသြှယရြေးစခနြး ၁ ခုပဲ ဖှင့လြှဈထားရာကနေ ၁၉၉၁ သှဂုတြ – စကတြငဘြာ တလအတှငြး ၉ ခု ဖှင့ပြဈလိုကတြယဆြိုကတညြးက ” မှနမြာဟာ အမရေိကနနြဲ့ ခှာနပေီမို့ ရငခြှငထြဲဆှဲသှငြးလို့ရပီလို့ ” တှကဆြရငြး ဖွာကှိုခငြးထားတဲ့သဘောပါ ။
ဒီစကားက အလကားပှောတာမဟုတဘြူးဗွ – အမရေိကနရြဲ့ပိတဆြို့မှုကို တောင့ခြံဖို့ မှနမြာဟာ နယစြပကြုနသြှယရြေးကို တိုးမှှင့လြာရလိမ့မြယလြို့ တရုတကြ တှကဆြမိထားပီဗွ ။ ဒါပမေဲ့ မှနမြာကတော့ အဲ့လောကြ မတှကဆြမိသေးဘူး – ဒါ့ကှောင့လြညြး နဝတဟာ ၁၉၉၁ မှာ နယစြပကြုနသြှယရြေးစခနြးတှေ မဖှင့လြှဈနိုငသြေးဘူးရယြ ။ တရုတကြသာ ကှိုဖှင့ထြားတာ – အမွှောအြမှငကြှီးပါပေ့ ။
၁၉၉၁ သှဂုတလြကုနမြှာတော့ ဗိုလခြွုပမြှူးကှီးစောမောငဟြာ ပီကငြးကို နိုငငြံတောခြရီးစဉသြှားလို့ တရုတြ ဝနကြှီးခွုပနြဲ့ တှေ့ဆုံကာ စီးပှားရေးပူးပေါငြးဆောငရြှကဖြို့ သဘောတူစာခွုပကြို လကမြှတရြေးထိုးလိုကပြါသတဲ့ ။ ဒါဟာ နောငြ ၅ နှဈစာ မှနမြာ့ကုနသြှယရြေးကံကှမျမာကို နှောငတြညြးပေးလိုကပြီဆိုတာ ဘယသြူသိနိုငလြမလေဲ ?
၁၉၉၁ အောကတြိုဘာဟာ မှနမြာ့ဒီမိုကရစေီအရှေ့အတှကြ ကှီးကယွတြဲ့လလို့ ပှောရမှာပါ ။ US ကှနဂြရကလြှှတတြောအြမတြ ၄၈ ယောကကြ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညလြှတမြှောကရြေးကှိုးပမြးပေးဖို့အတှကြ သမျမတဆီစာရေးသားတောငြးဆိုပီး ၂ ရကအြကှာ အောကတြိုဘာ ၁၄ မှာ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညဟြာ ငှိမြးခမွြးရေးနိုဘဲလဆြု ခွီးမှှင့ခြံလိုကရြပါတယြ ။ ကှနဂြရကလြှှတတြောနြဲ့ မီဒီယာတှကတေော့ ဖိအားပိုပေးဖို့ လှုပရြှားလာကှပါတယြ ။
နိုငငြံတကာရဲ့အာရုံဟာ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညအြပေါမြှာပဲ ရဈဝဲနလပေေီ ။ မှနမြာ့နိုငငြံရေးမှာ ပှညတြှငြးအငအြားစုတှသောမက နိုငငြံတကာအငအြားစုတှကပေါ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညကြို ဗဟိုပှုလှုပရြှားဖို့ဆုံးဖှတလြိုကတြဲ့ကာလလို့ပှောရမှာပါ ။
နိုငငြံခှားရေးအရာရှိ James K . Bishop က အောကလြှှတတြောရြဲ့ အာရှ – ပစိဖိတဆြိုငရြာဆပကြောမြတီကှားနာပှဲမှာ ” နဝတစဈအစိုးရဟာ လူထောငခြွီကိုပဈသတထြားရုံမက လူ ၅ သိနြးကို နရပေစြှန့ခြှာထှကပြှေးရအောငြ လုပထြားတယြ ; လူတှကေို ဖမြးဆီးပီး ပေါတြာနဲ့ လူသားနငြးမိုငြးရှာကိရိယာအဖှဈအသုံးခမွှုတှရှေိနတယြေ ” လို့ ထှကဆြိုခကွပြေးသှားပါတယြ ။ ဒီထှကဆြိုခကွကြ သာမနနြိုငငြံရေးဖှဈစဉကြို ထှကဆြိုတာမဟုတတြော့ပဲ နိုငငြံတကာရာဇဝတမြှုမှောကကြှောငြး လမြးစဖောတြဲ့ ထှကဆြိုခကွဗြွ ။
ဒါပမေဲ့ ၁၉၉၁ နိုဝငဘြာမှာ ပှညပြရောကမြှနမြာအတိုကအြခံတှစေုဖှဲ့ထားတဲ့ အဝေးရောကအြစိုးရအဖှဲ့ NCGUB ရဲ့ ဝနကြှီးခွုပြဦးစိနဝြငြး ဝါရှငတြနကြို ရောကလြာတော့ အိမဖြှူတောကြ လကခြံတှေ့ဆုံမဲ့သူ မရှိဘူးတဲ့ဗွာ ။ ကှနဂြရကကြတော့ ဦးစိနဝြငြးကို လကခြံတှေ့ဆုံခဲ့ပါတယြ ။ ပီးတော့ NCGUB ရဲ့ UN သံအမတဖြှဈသူ ဘီလားရရှဈ ( ဗိုလခြွုပအြောငဆြနြးသူငယခြငွြးဦးရာရှဈသား ) ကို အာရှပစိဖတဆြိုငရြာဆပကြောမြတီမှာ ထှကဆြိုခကွပြေးခှင့ြ ပှုခဲ့ပါတယြ ။
မှနမြာ့ဒီမိုကရစေီအရေးနဲ့ ပတသြတပြီး အိမဖြှူတောနြဲ့ ကှနဂြရကလြှှတတြောကြှား ဆငတြလမြး မှငြးတလမြးဖှဈနတောကို ကှည့ပြီး နဝတကတော့ အားတကနြလမေလေားပဲ ။
ဓါတပြုံ – ကနပြိုကတြီးမှသညြ မုနြးလားအထိ
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၈
၁၉၉၁ – ၉၂ ဟာ နဝတဗိုလခြွုပတြှအဖေို့ ပှညတြှငြးပှညပြအောငပြှဲခံတဲ့နှဈပဲဗွ ။ တရုတနြယစြပတြလွှောကြ လကနြကကြိုငအြဖှဲ့တှကေို အသာစီးနဲ့ အပဈအခတရြပစြဲနိုငလြိုကသြလို အထီးတညြးကနွနြတေဲ့ အဖှဲ့တှကေိုလညြး ထိထိရောကရြောကခြွမှေုနြးခှင့ရြနတယေဗြွ ။ ရိုဟငဂြွာ ၂ သိနြးခှဲကို ပှညသြာယာစဈဆငရြေးနဲ့ မောငြးထုတထြားတာတောငြ နိုငငြံတကာဖိအားက တိတိပပ မရှိဘူးရယြ ။ ပှညသြာယာစဈဆငရြေးကို ကုလသမဂျဂက ရှုံ့ခပွမေဲ့ နိုငငြံတကာရာဇဝတမြှုအဖှဈ အမညတြပနြိုငခြှငြးမရှိသလို ကွူးလှနသြူတှကေို အရေးယူဖို့ တရားရေးယနျတယားလညြး မတညဆြောကနြိုငခြဲ့ဘူးရယြ ။
အမရေိကနအြောကလြှှတတြောမြှာ James Bishop ရဲ့ ထှကဆြိုခကွဟြာလညြး စကားလုံးသပသြပပြဲဖှဈသှားခဲ့ပီး ဒုကျခသညပြှနလြညလြကခြံရေးခေါငြးစဉအြောကမြှာ အလှူငှတခွေို့လှူဒါနြးတာကလှဲလို့ စီနီယာဘုရြှအစိုးရဟာ ဘာမှ အရေးတယူမလုပခြဲ့ဘူး ။ ကှနဂြရကလြှှတတြောကြလညြး ဒီမိုကရစေီအရေးကိုသာအာရုံထားနတောမို့ နရပေစြှန့ခြှာထှကပြှေး ကရငြ + ကခငွြ + ရိုဟငဂြွာ ၅ သိနြးရဲ့ကံကှမျမာတှဟော အစှန့ပြဈခံပဲ ။
ဗကပပှိုကှဲအပီး မှောကပြိုငြးမှာ အထီးတညြးကနွနြတေဲ့ ကအေိုငအြကေို ခွမှေုနြးရငြး မှနမြာစဈတပလြကခြကွနြဲ့ ကခငွအြရပသြားတှေ တရုတပြှညဘြကထြှကပြှေးရပှနတြယြ ။ ၁၉၉၂ နှဈဦးပိုငြးတလွှောကလြုံး တရုတနြယခြှားစောင့တြပကြ ပှေးဝငလြာတဲ့ ကခငွအြရပသြားတှကေို ရိုကနြှကပြီးပှနမြောငြးထုတတြယြ ။
၁၉၉၂ ဧပှီကတွော့ တရုတနြိုငငြံခှားရေးဝနကြှီး အဲ့သလို ရိုကနြှကပြီး ပှနမြောငြးထုတတြာတှမရှေိဘူးလို့ ဗှောငထြှကငြှငြးတယြ ။ အမရေိကနအြစိုးရကတော့ လူနညြးစုအရေးကိဈစတှနေဲ့ပတသြတပြီး တုံနိဘာဝပေဲ ။ ကှနဂြရကကြလညြး လူနညြးစုအရေးကို ဦးစားပေးအနနေဲ့ မစဉြးစားဘူး – ” ဒါတှကေိုကွူးလှနနြတောစဈအစိုးရမို့ ; စဈအစိုးရသာပှုတကြသွှားရငြ အားလုံးအဆငပြှပေီ ; ဒီမိုကရစေီရရှိရငြ အားလုံးအိုကသှေားလိမ့မြယြ ” ဆိုပီးပဲခညွြးကပတြယြ ။
အိမဖြှူတောရြဲ့ မထုံတကတြေးနိုငမြှုအပေါြ မခံမရပနြိုငနြဲ့ လူသိရှငကြှားထှကတြှနြးတဲ့သူတှလညြေး ရှိလာတယြ ။ ဆီနိတတြာ Moynihan + Paul Simon + Jesse Helms တို့က ” ဒီသမျမတဟဟာ အာဏာရှငတြှနေဲ့ပတသြတရြငြ ပွော့ကိုပွော့လှနြးတယြ ; လူ့အခှင့အြရေးနဲ့ပတသြတပြီး ဘယလြိုရပတြညရြမလဲဆိုတာတောငြ တို့တတှမေေ့မွားမေ့ကုနပြီလားဟ ” လို့ ထှကပြှောရသညအြထိပဲ ။
ရဈခကွဟြိုးလဘြရုခြ + ပီတာတနြးနော့ဖြ တို့ကလညြး ” မှနမြာပှညဟြာ ကမျဘာ့အဆိုးဝါးဆုံးနိုငငြံတှထေဲမှာ အပါအဝငဖြှဈနပေီ ; အမရေိကနပြှညထြောငစြုအနနေဲ့ ကုလသမဂျဂကတဆင့ပြှငြးပှငြးထနထြနအြရေးယူသင့ပြီ ” လို့ လူသိရှငကြှားတိုကတြှနြးတယြ ။
ဒါပမေဲ့ ပှူနာက ဘယခြေါငြးစဉအြောကကြနေ မှနမြာကို အရေးယူမလဲ ?
ဒီမိုကရစေီရရှိရေးဆိုတဲ့ခေါငြးစဉဟြာ ဘေးကနေ ဖိအားပေးလို့တော့ရပမေဲ့ တိုငြးပှညတြခုရဲ့အခွုပအြခှာအာဏာကို ဝငရြောကစြှကဖြကဖြို့အထိ ပှငြးထနတြဲ့ခေါငြးစဉမြဟုတဘြူး ။
အဲ ! ထိထိရောကရြောကြ ဝငရြောကစြှကဖြကဖြို့ ခေါငြးစဉတြခုကို မိတဆြကလြိုကတြဲ့အခါမှာလညြး အခွိနအြခါမသင့တြဲ့အနအထေားနဲ့တိုးသှားပါရောဗွာ ။
ဓါတပြုံ – ရဈခကွဟြိုးလဘြရုခြ
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၉
စီနီယာဘုရြှအစိုးရကို လူသိရှငကြှားဝိုငြးဖိတဲ့သူတှထေဲမှာ ထငရြှားသူကတော့ မှနမြာ့လူ့အခှင့အြရေးတကကြှှလှုပရြှားသူ ဘိုဟားနား ပေါ့ ။ သူက ၁၉၉၂ ဧပှီမှာ ” လူသတကြှငြးသဈမွား ” ဆိုတဲ့ဆောငြးပါးနဲ့ မှနမြာပှညကြို ကမျဘောဒီးယားမှာဖှဈထားတဲ့ ခမာနီဂငွနြိုဆိုဒနြဲ့ နှိုငြးယှဉပြီးရေးထည့လြိုကတြာပဲ ။ အမှနတြော့ အခွီကှီးတငကြှည့လြိုကတြဲ့သဘောပဲဗွ ။ ပှူနာက စီနီယာဘုရြှအစိုးရဟာ ခမာနီနဲ့ပတသြတပြီး ရပတြညခြကွပြှောငြးထားတာတောငြ ၁၉၉၀ ဇူလိုငကြမှ – ပီးတော့ အဲ့လိုပှောငြးထားတာက ခမာနီတှကွေူးလှနတြဲ့ဂငွနြိုဆိုဒကြို ရှုံ့ခအွရေးယူဖို့ထကြ ဂငွနြိုဆိုဒဆြိုတဲ့အသုံးအနှုနြးကို မသုံးစှဲပဲ ကှားကတွဲ့ နိုငငြံရေးသဘောတူညီခကွတြခုရဖို့ ဘကပြှောငြးထိုငထြားတာပဲရှိသေးတာ ။ ကုလသမဂျဂရဲ့ ၁၉၈၅ ထုတြ ကမပြူးခွားအစီရငခြံစာမှာ ခမာနီတှရေဲ့ကွူးလှနမြှုဟာ နာဇီတှပေီးရငြ အပှငြးထနဆြုံးပဲလို့ရေးထားပမေဲ့ အမရေိကနပြှညထြောငစြုဟာ နိုငငြံတခုကို ဂငွနြိုဆိုဒရြာဇဝတမြှုနဲ့အရေးယူဖို့ အဆငသြင့မြဖှဈခဲ့တာ ဆယစြုနှဈနဲ့ခွီတယြ ။
ခမာနီတှကေို အရေးယူရငြ အမရေိကနအြစိုးရမှာလညြး အပှဈရှိတယဆြိုတဲ့ အနအထေားထိဖှဈလာနိုငတြယြ ။ တရုတြ – ဆိုဗီယကအြကှဲမှာ တရုတဘြကထြိုငလြိုကတြဲ့ အမရေိကနဟြာ တရုတတြပည့ခြမာနီတှကေို လူသားခငွြးစာနာမှုခေါငြးစဉအြောကကြနေ ထောကပြံ့ကူညီခဲ့တယြ – ကုလသမဂျဂအစီရငခြံစာက ဂငွနြိုဆိုဒလြို့ထုတပြှောတဲ့ ၁၉၈၅ မှာတောငြ ဒေါလြာ ၁၂ သနြး ပေးအပခြဲ့တယြ ။ ( ခမာနီတှကေို လကတြှေ့ခုံရုံးတငနြိုငခြဲ့တာတောငြ ၁၉၉၇ မှ )
ဒီတော့ ဂငွနြိုဆိုဒလြို့အသံထုတဖြို့က အလှတသြဘောတှနြးရုံနဲ့တော့ မရတတဘြူး ။ နိုငငြံတကာရာဇဝတမြှုနဲ့အရေးယူဖို့အဆကအြသှယတြညဆြောကပြီးမှ အခွိနကြိုကအြခါကိုကြ အသံထုတလြမှေ ; မဟုတရြငြ တှနြးကှည့လြိုကမြှ ပိုဝေးသှားတတတြာမွိုး ။
၁၉၉၁ – ၉၂ အတှငြး ရိုဟငဂြွာ + ကရငြ + ကခငွြ ၅ သိနြးမောငြးထုတခြံရတာတောငြ ၁၉၉၂ ဒီဇငဘြာ ကုလသမဂျဂက မှနမြာကို ရှုံ့ခရွာမှာ ” ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညကြို လှှတမြပေးခှငြးနှင့ြ အာဏာလှှဲမပေးခှငြး ” ကိုပဲ အဓိကထားခဲ့ပါတယြ ။ ကမပြူးခွားဂငွနြိုဆိုဒနြဲ့ဘယလြောကတြူတယပြဲပှောပှော ; နဝတကို ဘယလြိုပိတဆြို့ရမယပြှောပှော – အပှီးသတဆြုံးဖှတခြကွတြိုငြးဟာ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညလြှတမြှောကရြေးနဲ့ NLD ကို အာဏာလှှဲပေးရေးပဲဖှဈသှားပီးတော့ လူနညြးစုအရေးဟာ နောကတြနြးကို အပို့ခံခဲ့ရပါတယြ ။ နိုငငြံတကာရာဇဝတမြှုဥပဒတှနေေဲ့ အရေးယူဖို့ဆိုတာကတော့ အိပမြကတြောငြ မကလြို့မရသေးပါဘူး ။
ရိုဟငဂြွာ ၂ သိနြးခှဲကို မောငြးထုတထြားတဲ့ နဝတရဲ့ ပှညသြာယာစဈဆငရြေးနဲ့ပတသြတလြို့ ၁၉၉၃ ဧပှီ နွူးရီဗတဗြလဈသတငြးစာမှာ ” အာရှရဲ့ဘော့ဈနီးယား ” ဆိုတဲ့ဆောငြးပါး ပါလာပါတယြ ။ ဒါပမေဲ့ ပှူနာက ဆောငြးပါးရှငတြှေ မူရငြးတငစြားတဲ့ ဘော့ဈနီးယားမှာတောငြ ၁၉၉၂ နှဈလယကြနေ ၁၉၉၄ နှဈဦးအထိ အမရေိကနကြ ဝငရြောကစြှကဖြကဖြှရှငြေးဖို့ငှငြးဆနနြတောပါ ။ မှနမြာပှညအြရေးအတှကြ တိုကရြိုကဝြငရြောကစြှကဖြကဖြို့ဆိုတာဝလောဝေးပေါ့ ။ အဲ့လို ဝငရြောကစြှကဖြကတြဲ့လမြးကှောငြးထကြ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညကြိုဝနြးရံကှဆိုတဲ့ လမြးကှောငြးက ပိုဈေးသကသြာတာနတောကိုး ။
ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညကြိုဝနြးရံကှဆိုတဲ့ လမြးကှောငြးဟာ အနောကနြိုငငြံတှအတှေကဈြေးသကသြာရုံမက နဝတအတှကလြညြး သကသြာရာရသပေါ့ဗွာ ။ နိုငငြံတကာရာဇဝတမြှုတှနေဲ့ ခုံရုံးအတငခြံရမဲ့အစား လှောငခြွိုငထြဲထည့ထြားတဲ့ငှကငြယလြေးနဲ့ ဆှေးနှေးရတာ စဈဗိုလခြွုပတြှအတှေကြ အမွားကှီးအဆငပြှတောပေါ့ဗွာ ။
အခုတော့ အဲ့ဒီခတြနေဝငေသြှားပါပီ ။ နိုငငြံတကာရာဇဝတြဥပဒတှနေေဲ့ အရေးယူဖို့ရာသညြ မှကှေီးလကခြတမြလှဲဖှဈသှားပါပီ ။ ဒီနေ့ခတြေ မှနမြာအပေါတြငလြာတဲ့ ဖိအားဟာ နဝတခတြဖေိအားထကပြိုကှီးတယဆြိုတာ ကိုယ့လြူတှေ ပှတပြှတသြားသားမှငစြခငွေပြါတယြ ။ ဒါ့ကှောင့ြ အောကကြှေးလာနှိုကရြငြ ခပပြှတပြှတသြာ တုန့ပြှနလြှှတပြါ ။
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၁၀
ကလငတြနရြဲ့နိုငငြံခှားရေးဝနကြှီး ဝါရငခြရဈစတိုဖာက ” တရုတနြီကိဈစ နဲ့ ဘောလြကြနစြဈပှဲအပေါမြှာပဲ အာရုံရှိနလေို့ မှနမြာကိဈစကို ခေါငြးထဲတောငြ ထည့မြထားနိုငတြဲ့အခှအနေပေါ ။ ၁၉၉၃ ခုနှဈအတှငြး ဒကဈြမှနတြူးတူးအပါအဝငြ နိုဘဲလငြှိမြးခမွြးရေးဆုရှငြ ၅ ယောကဟြာ ထိုငြးနိုငငြံကို ရောကလြာခဲ့ပီး မှနမြာအတိုကအြခံတှနေဲ့တှေ့ဆုံခဲ့ပါတယြ – တဆကစြပတြညြး ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညလြှတမြှောကရြေးအတှကြ တောငြးဆိုခဲ့ကှပါတယြ ။ နိုဘဲလငြှိမြးခမွြးရေးဆုရှငြ အခငွြးခငွြး ရိုငြးပငြးတဲ့သဘောပေါ့ဗွာ ။ ဒါပမေဲ့အိမဖြှူတောကြတော့ နားသိပမြစှင့ခြဲ့ပါဘူး ။
အိမဖြှူတောရြဲ့မူဝါဒတှကေို စိတပြကွနြတေဲ့ အမရေိကနအြရာရှိတယောကကြတော့ ” တကယတြော့ဗွာ ကနွောတြို့အမရေိကနအြစိုးရမှာ ဗမာပှညနြဲ့ပတသြတတြဲ့ မူဝါဒဆိုတာကို ” မရှိဘူးလို့ ထုတပြှောရသညအြထိပါပဲ ။
ဒီနရောမှာထိထိရောကရြောကပြိတဆြို့ဒဏခြတဖြို့ကိုစိတမြဝငစြားတဲ့ အမရေိကနအြရာရှိတှရေဲ့ အကှောငြးပှခကွကြ ” မှနမြာ့အိမနြီးခငွြးနိုငငြံတှကေိုယတြိုငကြ ပိတဆြို့ဒဏခြတဖြို့ကို မထောကခြံလို့ ” ဟူသတဲ့ ။ အထူးသဖှင့ြ အမရေိကနနြဲ့ ပလဲနံသင့တြဲ့ထိုငြးကတောငြ မှနမြာကို ပိတဆြို့ဒဏခြတဖြို့ မထောကခြံလို့ပါတဲ့ဗွာ ။ အမှနတြော့ လာခငွရြငအြနီးလေး မလာခငွလြို့ခရီးဝေးဆိုသလို အိမဖြှူတောဟြာ ထိထိရောကရြောကကြိုငတြှယဖြို့စိတကြိုမပါတာပါ ။ အုပခြွုပရြေးပိုငြးအရာရှိတယောကကြဆိုရငြ ” ဗမာပှညကြိဈစလား ! အဲ့ဒါကှနဂြရကအြလုပလြေ ” လို့ခပြ ပှောငပြှောငပြုတထြုတခြဲ့ပါတယြ ။
ကှနဂြရကလြှှတတြောကြတော့ ၁၉၉၃ မမှော စတငလြှုပခြတပြါတယြ ။ ကှနဂြရကြ ဘကကြ resolution တခုထုတပြှနပြီး ကလငတြနအြစိုးရကို တောငြးဆိုတာက ” ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညလြှတမြှောကရြေး နဲ့ NLD ကို အာဏာလှှဲပေးရေး ” တဲ့ ။ အဲ့ဒီ resolution မှာ ထူးထူးခှားခှားထပပြါလာတာကတော့ ” ကုလသမဂျဂမှတဆင့ြ မှနမြာကို လကနြကဝြယယြူခှင့ပြိတဆြို့ဖို့နဲ့ စီးပှားရေးဒဏခြတပြိတဆြို့ဖို့ ” တောငြးဆိုတာပါ ။ ကှနဂြရကရြဲ့ resolution ကို သမျမတကလငတြနအြနနေဲ့ ရရေောပီးခပပြွော့ပွော့ အကောငအြထညဖြောပြေးဖို့တောငြ ၁၉၉၃ နှဈကုနအြထိအခွိနယြူရပါဦးမယြ ။
အမရေိကနဘြကကြဖင့နြှဲ့နသလေောကြ ခှသှကေလြကသြှကြ လှုပရြှားလိုကသြူကတော့ ထုံးစံအတိုငြး တရုတကြှီးပါ ။ ၁၉၉၃ ဇူလိုငမြှာ တရုတြ – မှနမြာပူးပေါငြးဆောငရြှကရြေးသဘောတူစာခွုပြ ၆ ခု ခွုပဆြိုလိုကပြါတယြ ။ အတိုးမဲ့ခွေးငှေ ဒေါလြာ ၆ . ၈ သနြးကိုလညြး မှနမြာဆီခွေးပေးလိုကပြါသတဲ့ ။ တရုတဆြီကခွေးထားတဲ့ ယှမငြှေ သနြး ၁၀၀၀ သုံးပီး + တရုတအြကူအညီနဲ့ဆောကတြဲ့ ရနကြုနြ – သနလြငွတြံတားဖှင့ပြှဲကို တရုတအြထူးသံတမနကြိုယတြိုငြ တကရြောကဖြှင့လြှဈပေးခဲ့ပီး မှနမြာကို အပီအပှငခြွုပကြိုငနြပေါပီ ။
၁၉၉၃ စကတြငဘြာလဆနြးမှာတော့ ကူမငြးမှာ မှနမြာကောငစြဈဝနရြုံးပှနဖြှင့နြိုငခြဲ့ပါပီ ။
၁၉၉၀ ပှည့လြှနနြှဈတှအတှေငြး အမရေိကနအြစိုးရရဲ့ မှနမြာ့အရေးကိုငတြှယမြှုကို ကှည့ရြငြ တခကွထြိရငြ တခကွလြှုပတြဲ့ counter – active အဆင့မြှာတောငြ မရှိပဲ ခှတရှေတတြိုကနြတေဲ့ drifting response အဆင့မြှာပဲ ရှိခဲ့ပါတယြ ။ အဲ့ဒါကှောင့လြညြး နဝတဟာ လသေံမာရဲခဲ့တာပါ ။
ကနွောတြို့ရဲ့ လကရြှိပှဲစဉမြှာတော့ proactive ပုံစံနဲ့ကိုငတြှယပြါတယြ ။ မှနမြာ + တရုတရြဲ့ လှုပရြှားမှုအပေါအြခှခေံပီး တုန့ပြှနတြာမွိုးမဟုတပြဲ ကိုယ့ဗြွူဟာနဲ့ကိုယြ ရှေ့တကတြာပါ ။ IFFM ဖှဲ့စညြးတာ ; အစီရငခြံစာထုတပြှနတြာ ; လူပုဂျဂိုလတြဦးခငွြးအလိုကနြာမညတြပပြီးအရေးယူဖို့အဖှဲ့ဖှဲ့စညြးတာ ; အမရေိကနအြောကလြှှတတြောကြ ဂငွနြိုဆိုဒလြို့သတမြှတကြှငှောတာတှမှော မှနမြာအစိုးရခငြးထားတဲ့ ဒုကျခသညပြှနလြညလြကခြံရေးကို ထည့သြှငြးမစဉြးစားပါဘူး ။
နဲနဲမှငအြောငယြှဉပြှောရရငြ ၁၉၉၃ မလမှော ကှနဂြရကတြိုကတြှနြးတဲ့ UN မှတဆင့အြကောငအြထညဖြောရြေးအခကွကြို ၁၉၉၃ နှဈကုနပြိုငြးမှ ကလငတြနအြစိုးရက အကောငအြထညဖြောပြေးခဲ့ပါတယြ ။ ” မှနမြာပှညသြို့ကုလသမဂျဂအထူးသံတမနအြဖှဲ့စလှေှတရြနနြှင့ြ ကုလသမဂျဂနဲ့မှနမြာကှား ပူးပေါငြးဆောငရြှကမြှုလွှော့ခရွနြ ဆိုတဲ့ကှနဂြရကရြဲ့ resolution ” ကို ၁၉၉၃ နှဈကုနမြှပဲ ကလငတြနအြစိုးရက စပှနဆြာပေးတာပါ ။ အမရေိကနဘြကကြ အဲ့သလို လေးကနဖြင့နြှဲ့စှာဆောငရြှကခြဲ့လို့သာ စဈအစိုးရဟာ လကမြ ထောငနြိုငခြဲ့တာဖှဈကှောငြးပါဗွား
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၁၁
ကလငတြနအြစိုးရကစိတမြပါလကမြပါဖှဈနပေီး ကှနဂြရကကြ တရှတဆြှဲတငနြလေို့သာ မှနမြာ့အရေးဟာ တအိအိနဲ့ ရှေ့တိုးနတောပါ ။ ဒါပမေဲ့ အမရေိကနရြဲ့ အဲ့သလို ထော့ကွိုးလိုကဗြွူဟာကိုတောငြ နဝတဟာ ” ဒို့မမှုပီဟေ့ ” လို့ မတုန့ပြှနရြဲပါဘူး ။
တရုတဆြီကပတြာကကပတြာပဲ – ဒါပမေဲ့ အမရေိကနကြှနဂြရကကြိုလညြး နဝတဟာ လောဘြီငှားပီး အသနားခံပါသတဲ့ ။ လူသိရှငကြှား လောဘြီငှားတဲ့ဖှဈစဉကြတော့ ကှနဂြရကလြှှတတြောအြမတဟြောငြး Lester Wolff ကို တလဒေါလြာ ၁ သောငြးနှုနြးနဲ့ ၁၉၉၃ ဖဖေောဝြါရီကစပီး လောဘြီငှားထားတာပါ ။ အမတဟြောငြး Wolff က လကရြှိကှနဂြရကလြှှတတြောအြမတဖြှဈနသေူတှကေို မှနမြာပှညဆြီအလညသြှားဖို့ စပှနဆြာပေးပီးတိုကတြှနြးပေးရပါသတဲ့ ။ အဲ့ဒီအမတတြှေ မှနြာပှညကြနေ အမရေိကနပြှနရြောကလြာရငြ နဝတဘကကြ ကာပှောပေးပေါ့ဗွာ ။ အမွားအမှငမြှာတော့ နဝတဟာ ” စီးပှားရေးပိတဆြို့သညြ ဒို့မမှုပီ ” လို့ အသံပှဲနဲ့အောနြတောပါ – လကတြှေ့မှာတော့ လောဘြီငှားပီးရပတြညတြဲ့အဆင့ပြါ ။
ကှနဂြရကတြှနြးအားနဲ့ UN ဘကကြ resolution ထှကလြာပီး ၂ လ ကှာတဲ့အခါ ၁၉၉၄ ဖဖေောဝြါရီမှာတော့ နဝတဟာ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညကြို ပှညပြကိုယစြားလှယအြဖှဲ့နဲ့ ပထမဦးဆုံးအကှိမအြဖှဈတှေ့ဆုံခှင့ပြေးလိုကပြါတယြ ။ Bill Richardson ဦးဆောငတြဲ့ ကိုယစြားလှယအြဖှဲ့ဟာ ဒေါဆြောငဆြနြးစုကှညနြဲ့တှေ့ဆုံရာမှာ ဒေါစြုက ထိရောကတြဲ့ပိတဆြို့ဒဏခြတမြှုတှခမွှေတဖြို့ တောငြးဆိုပါတယြ ။ Bill Richardson ကတော့ ” ဒေါစြုနဲ့စဈတပကြှား တှေ့ဆုံဆှေးနှေးပှဲဖှဈလာလိမ့မြယြ ” လို့ သတိနဲ့အကောငြးမှငပြါသတဲ့ ။ နဝတအဖို့ကတော့ ဒီလိုအကောငြးမှငခြှငြးဟာ သူတို့လိုခငွတြဲ့ဖိအားလွှော့ဖို့ဖှဈသှားပီဆိုတာကို ရိပမြိလိုကပြါတယြ ။ ကိုယစြားလှယအြဖှဲ့ ပှနသြှားတာနဲ့ နဝတက ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညကြို ၆ လတိုးခွုပတြဲ့အမိန့ထြုတလြိုကပြါတယြ ။
ဗိုလခြွုပခြငညြှန့ကြ ” ဒီမိနြးမဟာ အဖှူကောငကြိုလကထြပထြားပီးတော့ နိုငငြံခှားမှာပဲ နှဈ ၃၀ လောကနြလောတဲ့သူ ” လို့ ရနထြောငပြါသတဲ့ ။ ဒေါစြုနဲ့ နိုငငြံခှားကိုယစြားလှယတြှကေိုတှေ့ဆုံခှင့ပြေးခှငြးဖှင့ြ သူတို့အပေါတြငနြတေဲ့ဖိအားတှလွေော့သှားအောငြ ကစားလို့ရကှောငြး ပထမပှဲမှာတငြ ဗိုလခြွုပတြှကေ သိလိုကပြီလေ ။
ဗိုလခြွုပခြငညြှန့ရြဲ့နှုတသြီးကောငြးလွှာပါးစကားအပီးမှာတော့အမရေိကနအြစိုးရကိုယတြိုငကြ သံခငြးတမနခြငြးဖိအားတိုးပေးတဲ့အနနေဲ့ မှနမြာနိုငငြံသို့ သံအမတစြလှေှတခြှငြးကို ရပဆြိုငြးလိုကပြါတယြ ။ Moynihan တုနြးက လုပထြုံးလုပနြညြးနဲ့ ဂွောငကြပထြားတဲ့ သံအမတကြှီးနရောကို တရားဝငမြူဝါဒနဲ့ရပဆြိုငြးလိုကပြါပီ ။ ဂှကတွာက ခငညြှန့ကြလညြး ဒါကို မွှောလြင့နြတောဗွ ။ သူက လာသမွှအမရေိကနသြံအမတတြှကေို စီအိုငအြလေို့ထငနြတော ။ တိုကဆြိုငသြလားတော့မသိ – သံအမတကြှီးခန့အြပဖြို့လွာထားခဲ့ဖူးတဲ့ Vreeland ကလညြး စီအိုငအြမှော နှဈပေါငြးမွားစှာအလုပလြုပခြဲ့သူဗွ ။
ဓါတပြုံ – ရဈခကွဆြငနြြ
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၁၂
အမရေိကနနြိုငငြံခှားရေးဌာနက ထိုငြးနှင့မြှနမြာဆိုငရြာဒါရိုကတြာ John Finney ဟာ ၁၉၉၄ မတမြှာ ရနကြုနကြို ရောကလြာပီး အမရေိကနအြစိုးရဘကကြ ဖိအားတိုးပေးတော့မှာဖှဈကှောငြးပှောပါတယြ ။ နဝတကတော့တိုးပေးလာမဲ့ဖိအားဟာ သံခငြးတမနခြငြးဖိအားလောကသြာဖှဈတာကို ခန့မြှနြးမိနပေီမို့ သိပဖြှုံမပှပါဘူး ။ ဒေါစြုနဲ့ ရဈခကွဆြငနြတြို့တှေ့ဆုံပှဲပီးကတညြးက သံတမနဖြိအားတော့လာနိုငတြယြ ; ပိတဆြို့ ဒဏခြတတြာတော့မလာနိုငသြေးလို့ နဝတက တှကမြိနပေါပီ ။
၁၉၉၄ ဇှနလြကုနြ အောကလြှှတတြောြ ဆပကြောမြတီကှားနာပှဲမှာတောငြ မှနမြာနိုငငြံအပေါပြိတဆြို့ဒဏခြတဖြို့ ပါမလာသေးပါဘူး – အဲ့ဒီအစား ” ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညလြှတမြှောကရြေးနဲ့ အာဏာလှှဲပေးရေး ” ကိုပဲ resolution ထုတဖြို့ အားသနကြှပါတယြ ။ resolution မှာ ထူးခှားလာတာတခုကတော့ ” အမရေိကနပြှညထြောငစြုက မှနမြာနိုငငြံအပေါခြမွှတထြားတဲ့ လကနြကဝြယခြှင့ပြိတဆြို့မှုကို နိုငငြံတကာသပိတပြုံစံဖှဈအောငထြိလုပဖြို့ ” တောငြးဆိုထားတာပါ ။ နဝတလကထြဲက အာဏာဟာ အလှယတြကူနဲ့လွှောထှကလြာမယလြို့ အိမဖြှူတောရြော ကှနဂြရကအြမတတြှကရေော ထငနြကှတောပါ ။
ကှားနာပှဲမှာ ပူပူနှေးနှေးဗမာပှညကြပှနလြာပီး ထှကဆြိုခကွပြေးတဲ့ Bill Richardson က ” နဝတဟာ ပှောငြးလဲလာနိုငကြှောငြးနဲ့ ဗိုလခြွုပခြငညြှန့ဟြာ ခေါငြးမာဂိုဏြးသားတှရေဲ့ နောကပြှနဆြှဲခံနရတေယြ ” လို့ ထှကဆြိုသှားပါတယြ ။ ဒါပမေဲ့ သူက ပိတဆြို့ဒဏခြတမြှုတှလေိုအပတြယလြို့တော့ သခွောထှကဆြိုသှားပါတယြ ။
နိုငငြံခှားရေးဌာနအရာရှိ Thomas C . Hubbard က ” မူးယဈဆေးဝါးနှိမနြငြးရေးကိဈစဟာ လူ့အခှင့အြရေးကိဈစအပေါြ မလှှမြးမိုးစရတေော့ဘူး ” လို့ထှကဆြိုခကွပြေးသှားပါတယြ ။ ဒါဆို အမရေိကနအြစိုးရပိုငြးရဲ့ ရပတြညခြကွပြှောငြးသှားသလား ?
မထငပြါနဲ့ ! Thomas C . Hubbard က ဆကလြကထြှကဆြိုရာမှာ ” မှနမြာပှညနြဲ့ပတသြတလြို့ ရရှညေမြူဝါဒခမွှတဖြို့ကတော့ အခုမှ စဉြးစားတုနြး ” ပါတဲ့ ။ ဒါဆို အရငအြတိုငြး မူးယဈဆေးဝါးနှိမနြငြးရေးအတှကြ နဝတနဲ့ထိတှေ့ဆကဆြံရေးမူဝါဒက ဆကရြှိနရေောပေါ့ဗွာ ။
ပှငြးပှငြးထနထြနပြိတဆြို့ဒဏခြတဖြို့တောငြးဆိုသူတှကတေော့ အောကလြှှတတြောအြမတြ Rohrabacher နဲ့ အာရှလေ့လာစောင့ကြှည့ရြေးဒါရိုကတြာ Mike Jendrzejczyk ပါ ။
လှှတတြောအြမတြ Matthew G . Martinez ကတော့ ” ပိတဆြို့ဒဏခြတတြာဟာ မထိရောကဘြူး ; ကွူးဘားကိုပဲကှည့လြေ ” လို့ပှောတဲ့အတှကြ ကှားနာပှဲအတှငြး ဂှိုဟကြကွုနပြါတယြ ။ မှနမြာနိုငငြံမှာ စီးပှားရေးလုပနြတေဲ့ အမရေိကနလြုပငြနြးရှငတြှကလေညြး ပိတဆြို့ဒဏခြတတြာတှမလေုပဖြို့ ထှကဆြိုခကွပြေးသှားကှပါတယြ ။
ဒီလောကဆြိုရငြ နဝတအစိုးရ ဘာလို့အသကရြှူခွောငခြွောငနြဲ့ ရပတြညသြှားနိုငလြဲ ကိုယ့လြူတှမှငေကြှမှာပါ ။
ဓါတပြုံ – ပှငြးပှငြးထနထြနပြိတဆြို့ဒဏခြတဖြို့တောငြးဆိုသူ Rohrabacher
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၁၃
၁၉၉၄ နိုဝငဘြာမှာ Thomas Hubbard ဦးဆောငတြဲ့ အမရေိကနကြိုယစြားလှယအြဖှဲ့ဟာ မှနမြာပှညကြို ရောကလြာပါတယြ ။ Hubbard ရောကမြလာခငမြှာပဲ သနြးရှှေ + ခငညြှန့ကြ ဒေါစြုနဲ့ ၂ ကှိမတြိုငတြိုငြ တှေ့ဆုံဆှေးနှေးထားပါသတဲ့ – ၆ နှဈအတှငြး နဝတထိပတြနြးခေါငြးဆောငတြှနေဲ့ ဒေါစြုနဲ့ ပထမဆုံးတှေ့ဆုံဆှေးနှေးခှငြးပါပေ ။
နဝတဟာ Hubbard ကို ဘိနြးတိုကဖြကွရြေးလုပငြနြး စဈဆေးစီစဈခှင့ပြှုပီး ICRC ကိုလညြး ထောငတြှထေဲဝငစြဈခှင့ပြှုလိုကပြါတယြ ။ ၉၀ ရှေးကောကပြှဲရလဒအြတိုငြး အာဏာလှှဲပေးဖို့ကတော့ ဘာမှဖှဈမလာပါဘူး ။ Hubbard ခရီးစဉအြတှငြး မူးယဈဆေးဝါးနှိမနြငြးရေးနဲ့ ဒီမိုကရစေီအရေးကို နဝတက ကွှမြးကွှမြးကငွကြငွြ အလဲအထပလြုပပြီးကစားသှားတာပါ ။ အိမဖြှူတောကြတော့ Hubbard ရဲ့ခရီးစဉကြို အောငမြှငတြဲ့ ခရီးစဉအြဖှဈယူဆပါသတဲ့ ။
၁၉၉၄ သှဂုတြ မှာ တရုတနြဲ့မှနမြာ နယစြပကြုနသြှယရြေးနားလညမြှုစာခွှနလြှှာကို လကမြှတရြေးထိုးလိုကပြါပီ ။ မနြးလေးမှို့မှာလညြး တရုတကြောငစြဈဝနရြုံးဖှင့ပြီးပီလေ ။
၁၉၉၄ စကတြငဘြာမှာ ဗိုလခြွုပခြငညြှန့ြဦးဆောငပြီး ဝနကြှီး ၈ ပါး ခှံရံလကွြ တရုတပြှညကြို ခစွကြှညရြေးခရီးသှားခဲ့ပါတယြ ။
၁၉၉၄ ဒီဇငဘြာမှာ တရုတဝြနကြှီးခွုပြ လီပငြး မှနမြာပှညကြိုရောကလြာပီး ဗိုလခြွုပမြှူးကှီးသနြးရှှနေဲ့ တှေ့ဆုံဆှေးနှေးပါတယြ ။ ” အဓိကပရောဂကွလြုပငြနြးတှမှော တရုတကြုမျပဏီတှကေို အားပေးဖို့နဲ့ တရုတြ – မှနမြာဆကဆြံရေးရဲ့ ဗဟိုခကွဟြာ စီးပှားရေးလုပငြနြးတှဖှဈေကှောငြး ” လီပငြးက အာရုံထားပှောသှားပါတယြ ။
၁၉၉၅ ဇှနမြှာ ကူမငြး နဲ့ ရနကြုနကြှား လကှေောငြးခရီးစဉြ စတငပြှေးဆှဲတယြ ။
ပိတဆြို့ဒဏခြတမြှုတှလညြေး ထိထိရောကရြောကမြခမွှတဖြှဈသေးတော့ ၁၉၉၅ ဖဖေောဝြါရီအထိ မှနမြာနိုငငြံမှာ ဝငရြောကလြုပကြိုငနြတေဲ့ အမရေိကနစြီးပှားရေးအဖှဲ့ပေါငြး ၁၁၀ ရှိပါသတဲ့ ။
နဝတအဖို့ ပွားရညဆြမြးကာလလို့တောငပြှောရမလားမသိ – ၁၉၉၅ မှာ မှနမြာ့စီးပှားရေးဟာ တနှဈကို ၆ % နှုနြးနဲ့ တိုးတကလြာပါသတဲ့ ။ နဝတဗိုလခြွုပတြှအဖေို့ကတော့ ခေါငြးမော့ရငကြော့နရေုံပေါ့ဗွာ – အာဏာလကလြှှတဖြို့ဆိုတာ စိတကြူးစရာတောငမြလိုတော့တဲ့ကိဈစ ။
Richardson ကတောငြ ညဉြးခငွြးခရွာမှာ __ ” နဝတဗိုလခြွုပတြှကေ ကွုပတြို့အမရေိကနတြှကေို – ငါတို့က မငြးတို့အမရေိကနတြှကေို မလိုအပဘြူး ; မငြးတို့မရှိလညြး နောကတြယောကနြဲ့အလုပဖြှဈတယလြို့ ပှောနပေါရောဗွာ ” တဲ့ ။
၁၉၉၅ ဧပှီမှာ နာမညကြှီးတဲ့ ဆီနိတတြာ ဂွှနမြကကြိနြး မှနမြာပှညကြို ရောကလြာပီး ခငညြှန့နြဲ့တှေ့ဆုံဆှေးနှေးဖှဈပါတယြ ။ ဆှေးနှေးပှဲအပီးမှာ မကကြိနြးကှီးပါးစပကြ ထှကလြာတာက ” ဒီကောငတြှေ တကဲ့လူဆိုးတှကှော ” တဲ့ ။
၁၉၉၅ စကတြငဘြာမှာ မယဒြလငြးအောဘရိုကြ ရနကြုနရြောကခြလွာပီး သတငြးစာရှငြးလငြးပှဲမှာ စဈအစိုးရကို ပယပြယနြယနြယရြှုံ့ခသွှားခဲ့ပီး ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညကြိုခွီးကွူးသှားခဲ့ပါတယြ ။
အမရေိကနနြဲ့ မှနမြာ လနေဲ့ အပှနအြလှနရြနဖြှဈခဲ့တဲ့ကာလပါပေ ။
၁၉၉၅ ခုနှဈအထိ စဈအစိုးရအပေါြ ဥပဒတေိတိပပ ပှဌာနြးပီး ပိတဆြို့ဒဏခြတဖြို့ဖှဈမလာသေးတာကို မှငနြိုငပြါတယြ ။
ဓါတပြုံ – ဆီနိတတြာမကကြိနြး
ဒို့မမှုပီတဲ့လား – ၁၄
၁၉၉၅ မလေတုနျးကလညျး ဆီနိတျတာ မကောျနဲတယောကျမွနျမာပွညျရောကျလာပီး မှတျခကြျပေးသှားတာက ” နဝတနဲ့ ထိတှေ့ဆကျဆံရေးမူဝါဒဟာ ကဆြုံးနပေီ ” တဲ့ ။ မွနျမာပွညျကိုရောကျလာကာ NLD ခမောကျဆောငျးဓါတျပုံအရိုကျခံပီးပွနျသှားတဲ့ မကောျနဲဟာ ဆီးနိတျကို ရောကျတာနဲ့ ပိတျဆို့ဒဏျခတျဖို့ ဥပဒကွေမျးကိုတငျသှငျးပါတော့တယျ – တငျသှငျးတဲ့ဥပဒကွေမျးနာမညျက ” Free Burma Act of 1995 ” တဲ့ ။
၁၉၉၅ ဇှနျလ တရကျမှာ ကှနျဂရကျလှှတျတောျအမတျ ၆၁ ယောကျက ကလငျတနျဆီစာရေးပီး ” မွနျမာပွညျဆီ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုအသဈတှေ မရောကျရှိရေး ” တောငျးဆိုကွပါတယျ ။
ပိတျဆို့ဒဏျခတျဖို့ဥပဒကွေမျးဟာ အတညျဖွဈနိုငျခြရှေိကွောငျးပေါျလှငျသှားပါတယျ ။
နဝတဟာ အခြိနျသိပျမဆိုငျးရဲပဲ ၁၉၉၅ ဇူလိုငျ ၁၀ မှာ ဒေါျအောငျဆနျးစုကွညျကို နအေိမျအကယြျခြုပျကနေ လှှတျပေးလိုကျပါတော့တယျ ။
စဈအစိုးရဟာ ပိတျဆို့ဒဏျခတျမှုမုနျတိုငျးကို အံတုရဲဖို့မပွောနဲ့ ; လဖေိအားနညျးရပျဝနျးပေါျလာတာကိုတောငျ အလေးထားတုန့ျပွနျလေ့ရှိကွောငျး ဒီဖွဈရပျက သကျသပေါပဲ ။
မကောျနဲတငျသှငျးတဲ့ Free Burma Act of 1995 ဟာ အတောျထိရောကျပါတယျ – ဒီဥပဒကွေမျးမှာ –
၁ -အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှ ရငျးနှီးမွုပျနှံ့မြားနှင့ျအကူအညီမြားမွနျမာပွညျသို့မရောကျရှိရေး
၂ – ကုနျသှယျရေးဆိုငျရာအခှနျကငျးလှတျခှင့ျမြားရုပျသိမျးရေး
၃ – မွနျမာပွညျမှ အမရေိကနျသို့ပို့ကုနျမြားကို တားမွဈရေး
၄ – မွနျမာနှင့ျ အမရေိကနျကွား ခရီးသှားလာခှင့ျကိုကန့ျသတျရေး
၅ – ဘကျပေါငျးစုံ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အကူအညီမြား မွနျမာပွညျမရရှိရေး
စသဖွင့ျ ထောင့ျစုံအောငျပါဝငျပါတယျ ။ ဒီဥပဒအေတိုငျးသာဆိုရငျတော့ နဝတဟာ အခြိနျတိုအတှငျး ဒူးထောကျကသြှားမှာပါ ။ ဒါ့ကွောင့ျလညျး မပွဌာနျးဖွဈအောငျ နဝတဟာ ဒေါျစုကို အခြိနျမှီလှှတျပေးလိုကျတာပါ ။
ဒေါျစုကိုလညျးလှှတျပေးလိုကျရော Free Burma Act of 1995 ဟာ မပွဌာနျးဖွဈတော့ပဲ အဲ့ဒါထကျ ပြော့တဲ့ ပိတျဆို့မှုဥပဒစောပိုဒျတခြို့သာ ” အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏နိုငျငံခွားထောကျပံ့ကူညီခွငျးဥပဒေ ” မှာ ပါလာပါတော့တယျ ။ အဲ့ဒီပါလာတဲ့စာပိုဒျတှမှောတော့ ” အမရေိကနျပွညျထောငျစုက ကုလသမဂ်ဂဖှံ့ဖွိုးရေးရနျပုံငှသေို့ ပေးအပျတဲ့အကူအညီမြားအား မွနျမာပွညျမရရှိစရေ ” ဆိုတာလောကျပဲ ပါလာပါတော့တယျ ။ အမြားကွီးအားပြော့သှားတာပေါ့ဗြာ ။
မကောျနဲကတော့ မွနျမာ့ဒီမိုကရစေီအရေးကို တတျနိုငျသမြှ အားဖွည့ျပေးဖို့ ကွိုးစားပါတယျ – နဝတကို ပိတျဆို့မရတော့ ဒီမိုကရစေီအငျအားစုတှကေို ငှကွေေးပံ့ပိုးပေးဖို့ ဥပဒစောပိုဒျထည့ျသှငျးပေးပါတယျ ။ ရနျသူကိုပိတျဆို့မရတော့ မိတျဆှကေိုကူတဲ့သဘောပေါ့ ။ အဲ့ဒါကွောင့ျ ၁၉၉၅ မှာ မွနျမာ့ဒီမိုကရစေီအငျအားစုတှဟော ဒေါျလာ ၂ သနျး ရရှိခဲ့ပီး ၁၉၉၆ မှာ ဒေါျလာ ၂ သနျးခှဲရရှိခဲ့ပါတယျ ။ နောကျနှဈတှမှောလညျး အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဌာနက တိုးမွှင့ျပီးပေးသှားခဲ့ပါတယျ ။
၁၉၉၅ ဒီဇငျဘာ အမရေိကနျအောကျလှှတျတောျက resolution တခုထုတျပွနျပါတယျ – စဈအစိုးရအနနေဲ့တှေ့ဆုံဆှေးနှေးရေးတံခါးဖှင့ျဖို့ ; နိုငျငံရေးအကဉြျးသားတှလှေှတျပေးဖို့ ; မူးယဈဆေးဝါးကို ထိနျးခြုပျဖို့ ။ ဒါပမေဲ့ လှှတျတောျတရပျတညျးက ထုတျဆင့ျတဲ့ resolution ဟာ ဥပဒအောဏာသကျရောကျမှုမပါတဲ့အတှကျ ပိတျဆို့ဒဏျခတျမှုဥပဒတှေလေိုတော့ မထိရောကျပါဘူး ။
ဓါတျပုံ – မကောျနဲ
by rightsforburma | Sep 8, 2019 | ARTICLES
ဒီရက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သတ်ပီး ပြည်တွင်းမှာ ဟော့နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ DVB စကားဝိုင်းပါ ။
အဲ့ဒီစကားဝိုင်းမှာ ဆရာမကြီးတယောက်က ” လ၀ကငယ်စာရင်းအခိုင်အမာရှိရက်နဲ့ ဖျောက်ထားလို့ စိတ်ကောင်းလေးတွေမွေးကြပါ ” လို့ ထောက်လိုက်တာကနေ ရေရေလည်လည် ဟော့သွားပါတယ် ။
မနေ့က အဲ့ဒီစကားဝိုင်းဗီဒီယိုတခုမှာ ထပ်တွေ့တာက လူကယ်ပြန်၀န်ကြီးဌာနက ညွှန်မှူး ဒေါက်တာအောင်သူရိန်ကလည်း ” လ၀ကငယ်စာရင်းရှိရင် ; နံပါတ်ပြောနိုင်ရင် ” ဆိုပီး စကားသံထွက်လာပါတယ် ။
ဒီကိစ္စဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်တော့ မက်စရာဘာမှမရှိပေမဲ့ နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မှုရှု့ထောင့်က စဉ်းစားစရာ တချက်ရှိပါတယ် ။
ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပျောက်ပျက်မှုဟာ သာမန်ပြေးရင်း လွှားရင်း ကျပျောက်တာမဟုတ်ပါဘူး ။ တမင်တကာကို သိမ်းယူဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာပါ ။ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၇ ဩဂုတ်ဖြစ်စဉ်အတွင်း ရိုဟင်ဂျာတွေပိုင်သမျှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရွက်စာတမ်း အိမ်ခြံမြေဂရံတွေကို သိမ်းယူပီးဖျက်ဆီးတာပါ ။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို မသတ်ခင်လေးမှာတင် ; မောင်းထုတ်ခါနီးလေးမှာတင် ” စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေရှိရင် ထုတ်ပေးစမ်း ” လို့တကူးတကတောင်းယူပီး ဖျက်ဆီးတာပါ ။
ဒီကိစ္စကို ICC ရုံးတော်ကလည်း သူ့အမှုတွဲတွေမှာ သေချာထည့်ရေးထားပါတယ် ။ တူလာတိုလီအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုမှာ လူတွေကို မသတ်ခင် ရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကို သိမ်းဆည်းလိုက်ပီး သတ်လို့လည်း ပီးရော အလောင်းတွေကို မီးရှို့ ရာမှာ အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုပါ တပါတည်း‌ရောပီး မီးရှို့ပစ်ခဲ့ကြောင်း ICC အမှုတွဲမှာ သေချာထည့်ရေးထားပါတယ် ။
ICC အမှုတွဲမှာ ထည့်ရေးရတာက အကြောင်းရှိပါတယ် ။ ဒီလို လူတွေရဲ့ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေကို ဖျောက်ဖျက်မှုဟာ သာမန်ကာလျှံကာဖြစ်စဉ်တခုမဟုတ်ပဲ သီးသန့်နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မှုတခု အဖြစ်သတ်မှတ်ထားလို့ပါ ။ ဒါကို identity cleansing လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
ဒီလို ဖြစ်စဉ်မျိုး ကိုဆိုဗိုမှာလည်း ဖြစ်ခဲ့ပီး ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ကနဦးတုန့်ပြန်မှုအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာဘက်က လုပ်ခဲ့ရတာက ထွက်ပြေးကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းဒုက္ခသည်တွေကို register လုပ်ရာမှာ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းချိတ်ဆက်မှု နဲ့ မူရင်းဒေသအသေးစိတ်ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ရတာပါ ။ ဒုက္ခသည်တွေကို အထောက်အပံ့ပစ္စည်းဝေငှဖို့ သပ်သပ် register လုပ်တာမကတော့ပဲ သူ့ရဲ့ identity ကိုပါ တပါတည်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးထားတာပါ ။ ဘကုန်းဘက်က ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလည်း UN က ကိုဆိုဗိုတုန်းက ပုံစံအတိုင်း register လုပ်ပေးထားပါတယ် ။
* ဒါက identity cleansing ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာက သိထားတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားပါ ။ *
ဒီနေ့ လ၀က ငယ်‌မွေးနံပါတ်ကိစ္စ ပြည်တွင်းစကားဝိုင်းမှာ အသံထုတ်လာတာ တိုက်ဆိုင်မှုသပ်သပ် မကလောက်ပါဘူး ။
အထူးသဖြင့် ညွှန်မှူးအဆင့်က ထုတ်ပြောတယ်ဆိုတာ ဘာကို ဖြည်ထုတ်ချင်တာလဲ ?
ညွှန်မှူးဆိုတာ ၀န်ထမ်းပါ – ၀န်ထမ်းဆိုတာ နိုင်ငံရေးရာထူးယူထားသူမဟုတ်တဲ့အတွက် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကို ပြောခွင့်မရှိပါဘူး ။ အလွန်ဆုံးပြောခွင့်ရရင် အချက်အလက်ကိုပဲ ပြောခွင့်ရှိပါတယ် ။ ဒါတောင်မှ သူ့အထက်က မီးစိမ်းပြထားမှပါ ။
” အခု ရိုဟင်ဂျာ‌တွေရဲ့ ငယ်မွေးနံပါတ်တွေရှိပါတယ် ” လို့ ထွက်ပြောလာတာဟာ ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့ identity cleansing ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မှုနဲ့ ညိသွားမှာ ကြောက်လို့ ဖြည်ထုတ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်ကတော့ မြန်မာပြည်ကဘယ်ကဒ် ဘယ်နံပါတ်ကမှ ရင်ခုံစရာ မရှိ‌တော့ပါဘူး ။
မြန်မာပြည်ကအာဏာပိုင်‌တွေသာ သူတို့လုပ်ထားတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေအတွက် သူတို့ဖာသာ ‌ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်နေတာပါ ။
ကိုယ့်လူတွေ မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ် ။
by rightsforburma | Aug 3, 2019 | ARTICLES
၁၉၈၇ ကိုဆိုဗိုဒသမှော ဆာဘအြာဏာပိုငတြှကေ ကိုဆိုဗားအလဘြေးနီးယနြးတှကေို လူမိုးစုအလိုကြ ပဈမှတျထားပီး ကြောငြးထုတြ အလုပျထုတြ ထောငျခြ နိုငငြံရေးပိတျပငြ တိုငြးပွညျကနနှငျေထုတြ သတဖြွတျတာတှေ စတငျလုပဆြောငျခဲ့တယြ ။ ဆားဘီးယားသမျမတမီလိုဆီဗဈကတော့ ဒီလိုရကျစကကြှမြးကှုတျတဲ့ လုပရြပတြှကေို လူမိုးရေးသနြ့စငသြှားစရနေရြှငြးလငြးမှု (Ethnic Cleansing) ရယျလို့ နာမညျလှလှလေးပေးလိုကျပါတယြ။ Genocide လို့ နာမညျတပျခံရမဲ့အစား Ethnic Cleansing ဆိုတဲ့ ခပပြြော့ပြော့နာမညျနဲ့ Terminology တိုကျပှဲကို ထိုးဖောကျလိုကျတာ မီလိုဆီဗဈပါ။ မီလိုဆီဗဈရဲ့ ဒီ ethnic cleansing ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကမျဘာ့သံတမနတြှကလေညြး သံယောငျလိုကပြွောရငြး နိုငငြံရေးစငမြွငြ့ပေါကြို တငပြေးမိကှပါတယြ ။ Ethnic Cleansing ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အဲ့ဒီအခိနျကစပီး Genocide အစားထိုး အလှတသြဘောသုံးစှဲတဲ့စကားလုံးဖွဈလာပါတယြ။
Ethnic Cleansing ဟာ Genocide ကဲ့သို့ နိုငငြံတကာဥပဒစောခြုပျစာတမြးနဲ့ခညြနြှောငျမှု မရှိသျလောညြး Ethnic Cleansing မှာ Moral Responsibility ဆိုတာ ရှိတယြ။ မထငျမှတျဘဲ အဲ့ဒီ စကားလုံးဟာ အမရေိကနြ အစိုးရ အတှကြ သညြးခွကှေိုကြ စကားလုံး ဖွဈသှားခဲ့တယြ။ အမရေိကနြ အစိုးရ အနနေဲ့ Genocide ဆိုတဲ့ Term ကို သုံးလိုကရြငြ- သူ့မှာ ခကြျခငြြး လကငြငြး တိုကရြိုကြ ဝငရြောကြ စှကျဖကရြမယြ ဆိုတဲ့ ဥပဒေ က ရှိနတောကိုး။ ဒါကှောငြ့ Genocide စကားလုံးဟာ အမရေိကနြ အတှကြ အရေးယူရမယြ့ နိုငငြံ သို့မဟုတြ လူမိုးကို ဘယျလို ကိုငျတှယရြမယြ ဆိုတဲ့ ပွငျဆငျခိနြ၊ ဗြူဟာခမြှတျခိနြ မလုံလောကျဘူး။ ပှီးတော့ ကမျဘာ့ အသိုငြးအဝိုငြးက သူနဲ့ အတူ ပါဝငသြညြ ဖွဈစေ မပါဝငသြညြ ဖွဈစေ တဈကိုယတြောြ မိုကကြှေးခှဲ ဝငရြမယြ့ အွခအေနမေိုး ဖွဈသှားတယြ။ နရောတကာမှာ ဝငရြောကျစှကျဖကျတဲ့ ကမျဘာ့ ပုလိပကြှီး အဖွဈက အခွားနညြးကို အစားထိုးဘို့ရာ Ethnic Cleansing ဆိုတဲ့ Term က အမရေိကနြ အတှကြ အသုံး အငျမတနြ တဲ့တဲ့ စကားလုံး တဈခုပါ။
ဒါပမယြေ့ Ethnic Cleansing ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာကိုလညြး အမရေိကနျက အလှယျတကူ မသုံးပွနျပါဘူး။ Genocide ဆိုတဲ့ Term လို ခကြျခငြြး လကငြငြး ဝုနြးဒိုငြး ဝငရြောကျစှကျဖကြ စရာ မလိုပမယြေ့ – Ethnic Cleansing ကို အမရေိကနြ အစိုးရ အနနေဲ့ သုံးမိရငျလညြး ခေါငြးရှောငျလို့ မရတဲ့ ဖွရှေငြးပေးရမှုတှကေ ရှိလာပွနျပါတယြ။ Genocide ဖွဈပှီဟေ့ ဆိုရငြ အမရေိကနြ အနနေဲ့ ဘယသြူ့ကိုမှ အဖေါစြပနြဘေို့ မလိုဘဲ အရေးယူရပမေယြ့ Ethnic Cleansing ဖွဈပှီဟေ့ ဆိုရငတြော့ – အရေးယူကို ယူရမယြ ဒါပမယြေ့ အမရေိကနြ တဈနိုငငြံတညြး တာဝနျမဟုတြ- ကမျဘာ့ အသိုငြးအဝိုငြးမှာလညြး တာဝနရြှိတယြ။ ဒီကိဈစကို ဖွရှေငြးဘို့ ပူးပေါငြးပါဝငကြှ ဆိုတဲ့ အဓိပျပါယျကို ဖေါပြွပါတယြ။ (မွဖရှေငြးလို့ မရတဲ့ ကိဈစ တဈခု ဖွဈတယြ ဖွရှေငြးပေးဘို့ မဟာမိတတြှေ လိုတယြ လို့ ဆိုလိုတာပါ။)
မဟာမိတတြှေ ဘာကှောငြ့ လိုတာလဲ?
Genocide ဖွဈတယြ ဆိုတာ လူမိုးတူ (ဘာသာမတူ၊ အယူအဆ မတူ) လို့ ဖွဈနိုငျတယြ။ လကျနကြ အငအြားမြားသူက နညြးသူကို ကြူးလှနျတာ ဖွဈနိုငျတယြ။ အတူနထေိုငရြာ ဒသတှေငြးမှာ ဖွဈနိုငျတယြ။ ဒါကှောငြ့ Genocide ကြူးလှနသြူတှကေို အရေးယူ လိုကျတဲ့ နညြးနဲ့ ဖွရှေငြးပေးလို့ ရတယြ။ သို့သောြ Ethnic Cleansing ဖွဈပှီဟေ့ ဆိုရငတြော့ — မထငျမှတျဘဲ ပွသနာက ပိုကယြပြွနြ့သှားတာပါ။ (မထငျမှတျဘဲ ဆိုတာက Ethnic Cleansing ဆိုတဲ့ Term ကို စသုံးလိုကျတဲ့ မီလိုဆီဗဈ ကိုယျတိုငရြော၊ သူ့ စကားလုံးကို နောကျက သံယောငြ လိုကျတဲ့ သံတမနတြှရေော မထငျထားလိုကျတဲ့ အဓိပျပါယြ ကယြပြွနြ့မှုကို ဆိုလိုတာပါ။) Ethnic Cleansing ရဲ့ ဝေါဟာရ စကဝြနြးထဲမှာ – “လူမိုးစု တဈစုကို သူတို့၏ မူလ ပိုငျဆိုငျခဲ့ရာ နရောဒမှေ ရှငြးထုတပြှီး အခွားသူမြားက နယမြွလေုယူခွငြး” ဆိုတဲ့ အဓိပျပါယြ ပါဝငသြှားတာပါ။ ဒီ အတှကြ Ethnic Cleansing ကြူးလှနျခံရတဲ့ လူမိုးစုကို သူတို့ရဲ့ မူလဒသေ မှာ ဘေးကငြးလုံခှုံစှာ ပွနျလညြ နရောခပြေးရမယြ ဆိုတဲ့ Safe Zone ပါဝငျလာမှုပါပဲ။ အလှယျတကူ မွငျနိုငျဘို့ အတှကြ ဥပမာ က- Genocide ကြူးလှနျခံရတဲ့ ဂြူးလူမိုးတှကေို ဂငြျနိုဆိုကြ ကြူးလှနြ ခဲ့တဲ့ နရော ဂြာမဏီမှာ နရောပွနပြေးခဲ့ခွငြး မရှိဘူး။ သို့သောြ Ethnic Cleansing ကြူးလှနျခံရပါတယျလို့ သတျမှတျခံရတဲ့ လူမိုးတိုငြး နရော တိုငြးဟာ Safe Zone တှေ ဖနျတီးပေးခွငြးကို ရရှိခဲ့ကှတယြ။ ကြူးလှနသြူတှကေို အရေးယူယုံမြှ မက ကြူးလှနျခံရသူမြား အတှကြ နယမြွေ ကိုယျစီ ရရှိသှားတာပါ။ ကြူးလှနျခံရသူမြား အတှကြ ကိုယျပိုငြ လုံခှုံရာ နယမြွေ ဖနျတီးပေးဘို့ရာ ကမျဘာ့ အသိုငြးအဝိုငြး ဖွဈတဲ့ UN ကို ရှေ့တငျလုပရြတာမိုး ဖွဈတဲ့ အတှကြ မဟာမိတျက မရှိမဖွဈ လိုအပျလာပါတယြ။
ဒီအတှကြ ထငရြှားတဲ့ ဥပမာကတော့ ဘော့ဈနီးယားပါပဲ ။ ဘော့ဈနီးယားကို ဂငြျနိုဆိုဒအြဖွဈ တရားဝငသြတျမှတျမှုက ပှဲပီးလို့နှဈအတောကြှာမှ ICTY ရုံးတျကော သတျမှတျတာပါ ။ ဖွဈစဉအြတှငြးဝငရြောကျစှကျဖကျမှုတှမှောတော့ Ethnic Cleansing ခေါငြးစဉအြောကနြပေဲ လုပဆြောငသြှားခဲ့ပါတယြ ။ Ethnic Cleansing လို့ နာမညျတပျပီးတဲ့နောကျမှာ ဗငြ့ဈ – အိုဝငြ အစီအစဉအြတိုငြး ၁၉၉၃ ဧပွီမှာ နယမြွခှေဲဝဖေို့လုပပြေးပါတယြ ။ မအောငမြွငတြော့ ၁၉၉၃ မလမှော ဘော့ဈနီးယားနိုငငြံအတှငြး UN Safe Area ၆ ခု သတျမှတပြေးတာမိုးဖွဈလာပါတယြ ။ ” Ethnic Cleansing လို့ နာမညျတပျထားရငလြပေါကှာ – Genocide လိုဝငဆြျဖောို့မရှိပါဘူး ” လို့ထငနြရငြေ မှားပါတယြ ။ ကိုဆိုဗိုဖွဈစဉျမှာ တိုကရြိုကဝြငရြောကျစှကျဖကျမှုမွနျဆနျခဲ့ပါတယြ ။ ဗုံးကှဲစဈဆငရြေးစတငျတဲ့ ညမှာ အမရေိကနသြမျမတကလငျတနျက ဘဲဥပုံခမြးမကနေ ဟိုလိုကော့ဈနဲ့ နှိုငြးယှဉပြွောဆိုခဲ့ပါတယြ ။ ICTY ရုံးတျကောတော့ ကိုဆိုဗိုဖွဈစဉျကို Ethnic Cleansing လို့ပဲ နာမညျတပျခဲ့ပါတယြ ။ ကိုဆိုဗိုဒသကေတော့ အလဘြေးနီးယနြးတှလကျေထဲ အပီးအပိုငရြောကရြှိသှားပါပီ။
Ethnic Cleansing နဲ့ Genocide ရဲ့ အဓိပျပါယျကတော့
“သား ရှှအေိုး ထမြးလာတာကို မွငျခငြျတယြ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ “ဘာဖွဈဖွဈ ငါ့သား အသကရြှငရြငြ တောပြှီကှာ” ဆိုတဲ့ အဓိပျပါယျမိုး ဖွဈပါတယြ။
ကွှနတြျတောို့ CRM ကတော့ အားမရပါဘူး-
ခုလညြး အမရေိကနြ ဒုသမျမတ မိုကျပငြ့ဈ ကိုယျတိုငျက Ethnic Cleansing လို့ ထုတပြွောပှီ ဆိုတော့ ကြူးလှနျခံရသူမြား အတှကြ (၁) Safe Zone သခြောတယြ။ (၂) ကြူးလှနသြူမြားကို အရေးယူဘို့ သခြောတယြ။ ဆိုတဲ့ အဆငြ့ကို ရောကသြှားခဲ့ပါပှီ။ သို့သောြ-
UN ကို ရှေ့တငြ ဖွတသြနြးရတာ အခိနပြေးရပါတယြ။ (ခု အွခအေနမှော အခိနပြေးရတာ မွနျတဲ့ အနအေထားကို ရောကသြှားပါပှီ) သို့သောြ ကွှနတြျတောို့ CRM အနနေဲ့ကတော့ US ကို ရှေ့ထှကြ (ဘယသြူ့မှ အဖေါမြစပျဘဲ) ဝုနြးဒိုငြး ဖွရှေငြးစလေိုတာပါ။ ဒီ အတှကျလညြး ဆကျတှနြးသှားမှာပါ။
အမရေိကနြ အနနေဲ့ Ethnic Cleansing လို့ပဲ သုံးတယဟြေ့ ရယျလို့ စိတျဓါတျကသြူတှေ ရှိနနေိုငျလို့ ဒီ ရှငြးတမြးကို ရေးသားတာပါ။
Safe Zone သခြောတယြ။ ကြူးလှနသြူမြားကို အရေးယူမှာ သခြောတယြ။